आज माघ ३ शनिवार, यस्तो छ तपाईको राशिफल सुचनामन्त्री पर्वत गरुङद्वारा 'नागरिक एप' सार्वजिनक, एपका विशेषता के के? हेटौडाको सडक निमार्णमा चरम लापरवाही जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहित पाँच जना जुवाको खलबाट पक्राउ गण्डकीविरुद्ध ९८ रनको फराकिलो जित निकाल्दै आर्मीको विजयी सुरुवात: पिएम कप २४ घण्टामा दुई सय ७० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, ५ जनाको मृत्यु भर्खरै प्रकाशित SHOW BREAKING NEWS
News under खेलकुद
काठमाडौँ ।आज अर्थात&nbsp; शुक्रबारदेखि सुरु भएको चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको छ । गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ९८ रनको फराकिलो जित निकाल्दै आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको हो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै दुई सय ८७ रन बनायो । उसका लागि...
काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगको आयोजना गरेको छ । माघ ७ बाट शुरु खेलको उद्घाटन र फाइनल खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछ भने बाँकी खेल सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी टिमहरुमा विराटनगर महानगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट, वालिङ नगरपालिका स्याङजा, चौदण्डगढी नगरपालिका उदयपुर, नेपाल...
काठमाडौँ । नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरीयताको शीर्ष तीनमा उक्लिएका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ (बीडब्लुएफ)ले शुक्रबार जारी गरेको वरीयतामा प्रिन्स ८ औँ स्थानबाट तेस्रो स्थानमा उक्लेका हुन्। वरीयताको शीर्षस्थानमा डेनमार्कका म्याड्स जुवेल मोलर र दोस्रोमा भारतका वरुण कपुर रहेका छन्। विश्व जुनियर वरीयताको शीर्ष ३ भित्र पर्नु...
प्रधानमन्त्री कप : उद्घाटन खेलमै विनोद भण्डारीको शतक पार
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटको उद्घाटन खेलमै त्रिभुवन आर्मीका विनोद भण्डारीले शतक बनाएका छन् । शुक्रबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा आर्मीका कप्तान विनोदले गण्डकी प्रदेशविरुद्ध शतक प्रहार गरेका हुन् । उनी १ सय ११ रन बनाएर आउट भए । ७२ बलको सामना गरेका उनले चार चौका र तीन छक्का प्रहार...
पीएम कप पुरुष क्रिकेटआजदेखि सुरु हुँदै,उद्घाटन खेल त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेशबीच हुने
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा आजदेखि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको क्यानले जनाएको छ । क्यानले प्रतियोगिताको एकदिन अघि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण तयारी...
प्रदेशस्तरीय छनोट खेलमा रुपन्देही विजयी : पिएम कप
काठमाडौँ ।&nbsp; प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रुपन्देही प्रादेशिक च्याम्पियन बनेको छ। बिहीबार सिद्धार्थ रंगशालामा भएको खेलमा बाँकेलाई १०७ रनको फराकिलो अन्तरले हराउदै रुपन्देही च्याम्पियन भएको हो।&nbsp; टस जितेर ब्याटिङ गरेको रुपन्देहीले निर्धारित ४० ओभरको खेलमा ८ विकेट क्षतिमा १८७ रनको योगफल बनाएको थियो। उसका...
अन्तर्राष्ट्रिय हाइस्पिड किक प्रतियोगिता नेपालमा हुने
काठमाडौँ ।नेपालमै पहिलोपटक हाइस्पिड किक च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता नेपाल ओपन अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल पुम्से हाइस्पिड किक तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप हुने भएको छ ।नेपालका ६ सय खेलाडीको सहभागिता रहने उक्त प्रतियोगिता काठमाडौँमा माघ दोस्रो साता कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङ हलमा हुन लागेको हो । कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङ, स्युचाटार तेक्वान्दो डोजाङ, मूलपानी तेक्वान्दो डोजाङ, बाल गीताञ्जली स्कुल,...
३६ बलमा सतक प्रहार गर्दै सेफीले बनाइन नयाँ विश्व रेकर्ड
काठमाडौँ । न्युजिल्यान्डकी महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइले टी&ndash;२० क्रिकेटमा नयाँ विश्व रेकर्ड बनाएकी छिन् । सोफीले टी&ndash;२० क्रिकेटमा ३६ बलमा सतक प्रहार गर्दै नयाँ विश्व रेकर्ड बनाएकी हुन् । सोफीले १० वर्ष पहिले वेस्टईन्डिजका महिला क्रिकेटर डायन्ड्रा डाटीनले ३८ बलमा सतक बनाएको किर्तिमान तोड्न सफल भएकी हुन् । डाटीनले दक्षिण अफ्रिका...
ब्राइटनलाई हराउँदै म्यानचेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष तीनमा उक्लियो
काठमाण्डौ &ndash; इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी शीर्ष तीनमा उक्लिएको छ । बुधबार राति भएको खेलमा ब्राइटनलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराउँदै म्यानचेस्टर सिटी अंक तालिकाको शीर्ष तीनमा उक्लिएको हो । सिटीका लागि पहिलो हाफको अन्तिम समयमा फिल फोडेनले गरेको एक गोल नै निर्णायक बन्यो । फोडेनले केबिन डि ब्रुएनाको पासको...
पिएम कप : लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रुपन्देही फाइनलमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रुपन्देही समूह &lsquo;ए&rsquo;बाट फाइनल पुगेको छ।पाल्पालाई १५८ रनको भारी अन्तरले हराउँदै रुपन्देही फाइनलमा पुगेको हो । यससँगै लुम्बिनी बिहीबार समूह &lsquo;बी&rsquo; को विजेता बाँकेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बुधबार भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको रुपन्देहीले निर्धारित ४०...
पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड: गौरिकालाई उत्कृष्ट महिला खेलाडीको उपाधि
काठमाडौँ । १३ औं सागमा ४ वटा स्वर्ण, २ रजत, ३ कांस्य पदक विजेता पौडी खेलाडी गौरिका सिंह यस वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी भएकी छन् । मंगलबार आयोजित १७ औं पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा गौरिकालाई उत्कृष्ट महिला वर्षको उपाधिबाट सम्मान गरिएको हो । उनले १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल पनि प्राप्त गरेकी छन्...
रविन्द जंग शाहीको कप्तानीमा कर्णाली प्रदेशको १४ सदस्यी टोली घोषणा :पिएम कप
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि कर्णाली प्रदेशको टिम घोषणा भएको छ । रविन्द जंग शाहीको कप्तानीमा १४ सदस्यी टोली घोषणा भएको हो । प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट माघ २ गतेबाट टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ ।उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश टीयू मैदानमा...
सुदूरश्चिम प्रदेशको टिम घोषणा : पिएम कप
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि सुदूरश्चिम प्रदेशको टिम घोषणा भएको छ ।&nbsp; पीएम कप पुरुष क्रिकेट माघ २ गतेबाट टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ ।प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागिय टोलीसहित १० टिमको सहभागिता रहनेछन् । प्रतियोगितामा सहभागी १० टोलीलाई २ समूहमा विभाजन गरिएको...
राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलकिपर ६५ वर्षे शाहीको निधन
काठमाडौ । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलकिपर लोकबहादुर शाहीको निधन भएको छ। शाहीको आइतबार राती ९ः३० बजे पुर्ख्यौली घर दैलेखको चोरत्तामा निधन भएको हो । एक साताअघि दैलेख पुगेका उनको त्यसअघि चेकअप गराउँदा खासै समस्या नदेखिए पनि तीन चार दिन यताबाट भने खानामा रुची कम भएको थियो । दक्षिण एसिायली खेलकुद साग...
काठमाडौं &ndash; नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वगोलकिपर लोकबहादुर शाहीको निधन भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)परिवारका सदस्यलाई उदृत गर्दै जनाएका छन् । शाहीको विभिन्न अंगमा समस्या देखिएको थियो । उनको पुर्ख्यौली घर दैलेखमै उनको अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ । शाही नेपाली फुटबलले पाएको उत्कृष्ट गोलकिपरमध्ये एक हुन् । उनले ८० को...
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी कुन्दनसिंहको २३ वर्षको उमेरमा मृत्यु
काठमााडैँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी कुन्दनसिंह राजपुतको निधन भएको छ । उनको २३ वर्षको उमेरमा जलेश्&zwj;वरस्थित घरमै आइतबार बिहान ८ बजे&nbsp; निधन भएको हो । &nbsp;एक वर्ष देखि उपचाररत उनी मिर्गौला पिडित थिए । कुन्दनले दुई वर्षअघि काठमाडौंमा भएको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा प्रदेश दुईवाट सहभागिता जनाएका थिए । कुन्दनलाई बचाउन &lsquo;क्रिकेटर...
नेपाली धावक पुष्पा भण्डारीले जितिन् ढाका म्याराथनको उपाधी
काठमाडौं &ndash; नेपाली धावक पुष्पा भण्डारीले बंगलादेशको ढाकामा भएको बंगबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथनको उपाधि जितेकी छिन् । विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ)की खेलाडी रहेकी पुष्पाले साउथ एसियन क्याटेगोरीतर्फ पहिलो स्थान हासिल गरेकी हुन् । उनले फुल म्याराथनको निर्धारित दूरी २ घण्टा ५९ मिनेट ४१ सेकेण्डमा पूरा गरेकी हुन् । यस...
ग्रानडामाथी बार्सिलोनाको शानदार जित,मेस्सी र ग्रिजम्यान गरे दुई/दुई गोल
काठमाडौं &ndash; कप्तान लिओनल मेस्सी र एन्टोनी ग्रिजम्यानको दुई/दुई गोल मद्दतमा बार्सिलोनाले स्पानिस ला लिगामा ग्रानडालाई ४&ndash;० ले पराजित गरेको छ । सहज जितपछि बार्सिलोना फेरि तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । उता दोस्रो स्थानको रियल मड्रिड भने ओसासुनासंग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ । ग्रानडाको मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले तीन गोल पहिलो हाफमा...
पिएसएलको ड्राफ्टमा पारस सहित १० खेलाडी
पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) २०२१ को ड्राफ्टमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित १० खेलाडी ड्राफ्टमा परेका छन् । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले शनिबार ड्राफ्टमा सहभागी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालबाट प्लेनिटम क्याटेगोरीमा सन्दीप लामिछाने र सिल्भर क्याटेगोरीमा पारस सहित ९ खेलाडी परेका छन् ।...
पीएम कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक (तालिका सहित)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री (पीएम) कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । जस अनुसार खेल माघ २ गतेबाट सुरु हुने छ । । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले शुक्रबार खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पीएम कपका लागि प्रदेशस्तरीय छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेका छन्।प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागीय टिमसहित १०...
‘पल्सर स्पोर्टस अवार्ड’को सत्रौँ संस्करण आउँदो मङ्गलबार
काठमाडौँ । &lsquo;पल्सर स्पोर्टस अवार्ड&rsquo;को सत्रौँ संस्करण नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले आउँदो मङ्गलबार आयोजना गरेको छ ।। एनएसजेएफ०ले &lsquo;पिपल्स च्वाइस&rsquo;, वर्ष पुरुष, महिला, युवा र वर्ष प्रशिक्षक विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ । &lsquo;पिपल्स च्वाइस&rsquo; विधातर्फ पौडीकी गौरीका सिंह, कराँतेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केट बलकी सदिना श्रेष्ठ...
बिल्बाओमाथी बार्सिलोनाको ३–२ को जित,मेसीले गरे दुई गोल
काठमाडौं &ndash; स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोनाले एथ्लेटिक बिल्बाओलाई पराजित गरेको छ। बुधबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले बिल्बाओलाई ३&ndash;२ गोलले पराजित गरेको हो। जितसँगै बार्सिलोना अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। खेलमा अग्रता भने बिल्बाओले विलियम्सको गोलबाट लियो। गार्सियाको पासमा विलियम्सले तेस्रो मिनेटमा गोल गरेर बिल्बाओलाई अग्रता दिलाए। खेलको १४ मिनेटमा बार्सिलोनाले गोन्जालेजको गोलबाट...
प्रोत्साहन भत्ताको माग गर्दै खेलकुद मन्त्री तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआइपिए) ले बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईदिन माग गर्दै संघले पत्र बुझाएको हो । संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक टोली बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको हो । ज्ञापन...
‘नयाँ प्रतिभावान खेलाडी’ कार्यक्रमअन्तर्गत भलिबलका २४ खेलाडी छनोट
काठमाडौँ । नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानले &lsquo;नयाँ प्रतिभावान खेलाडी&rsquo; घोषणा कार्यक्रमअन्तर्गत भलिबलका २४ खेलाडीको छनोट गरेको छ । जसमा १२ पुरुष र १२ महिला रहेका छन् । ५२ खेलाडी मध्येबाट प्रतिभा तथा उचाइको आधारमा २४ खेलाडीको छनोट गरिएको हो । राखेप सदस्य&ndash;सचिव रमेशकुमार सिलवालले प्रत्येक खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप मासिक ३...
३ सदस्यीय नेपाली एथलेटिक्स टोली ढाका प्रस्थान
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th January 2021
काठमाडौँ । ३ सदस्यीय नेपाली एथलेटिक्स टोली मंगलबार बंगलादेशको ढाका प्रस्थान गरेको छ । बंगबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथनमा सहभागी हुन २ खेलाडीसहित ३ सदस्यीय नेपाली टोली ढाका प्रस्थान गरेको हो । जनवरी १० तारिखमा हुने प्रतियोगिताका लागि किरणसिंह बोगटी र पुष्पा भण्डारीले ढाका गएका हुन्। दुवै नेपालमा भएको १३ औं...
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस कोरोनामुक्त, स्वास्थ लाभको कामना गर्ने सम्पुर्णलाई धन्यवाद
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । सङ्क्रमित भएको २५ दिनपछि उनी कोरोनामुक्त भएका हुन् । यसको जानकारी उनले ट्विटरमार्फत दिएका छन् । साथै उनले आफ्नो स्वास्थ लाभको कामना गर्ने सम्पुर्णलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । उनले ट्विट गर्दै आफु २०२१को लागि तयार...
पर्वतीय खेलकुद महोत्सव हुँदै , अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको समेत सहभागीता हुने
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा आउँदो फागुन २० गतेदेखि पर्वतीय खेलकुद महोत्सवको आठौँ संस्करण सुरु हुने भएको छ । साहासिक पर्वतीय खेलकुदको माध्यमद्वारा पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्य सहित देल खेल आयोजना गर्न लागिएको हो । महोत्सवमा परम्परागत तथा साहासिक खेलहरु आर्चरी, ठेलो, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोइङ, साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्रस कन्ट्री रनिङ, मोटर स्पोर्टस,...
अर्घाखाँची बुलेटिन डट्कमद्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना
अर्घाखाँची । अर्घाखाँची बुलेटिन डट्कम अनलाइन मिडियाले प्रथम खुल्ला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । पुराना खेलाडीलाइ सम्मान नयाँ खेलाडीलाइ स्थानको उद्धेश्यका मिडियाले खेल आयोजना गरेकोे हो । पौष २७ बाट खेल सुचारु हुने गरि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जसको फाइनल माघेसक्रान्तिको दिन हुने छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा...
जारी बिग वसमा शनिबार पहिलो खेलको तयारीमा सन्दिप
काठमाडौँ । अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिगमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले यस यामको पहिलो खेल खेल्ने भएका छन्। चौध दिनको अनिवार्य क्वारेन्टाइनको समय सकिएपछि शनिबार उनले पुरानो क्लब मेलवर्न स्टार्सविरुद्ध खेल्न लागेका हुन्।उनी होबार्ट हुरिकेन्सबाट खेल खेल्दै छन् । उनी सम्मिलित टोली होबार्ट सातौँ खेल खेल्ने तयारीमा छ। हालसम्म खेलेका...
पिएम कपमा प्रदेश एक विजेता, पाँच लाख पुरस्कार
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश १ को हातमा परेको छ । दाङको लमहीमा भएको फाइलनमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई ६ रनले हराउँदै प्रदेश १ ले उपाधि जितेको हो । प्रदेश १ ले दिएको १ सय ६ रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ९९ रन...
ओल्मोको निर्णायक गोलसँगै लाइपजिग बुण्डेसलिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो
काठमाडौं &ndash; एमिल फोसवर्गले पेनाल्डी गुमाए पनि डानिएल ओल्मोको निर्णायक गोलमा स्टुटगार्टलाई पराजित गर्दै आरबी लाइपजिग जर्मन बुण्डेसलिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । ओल्मोले दोस्रो हाफमा गरेको एकमात्र गोल मद्दतमा लाइपजिगले स्टुटगार्डलाई उसैको मैदाना १&ndash;० ले पराजित गरेको हो । ओलमोले ६७औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यसअघि पहिलो हामै लाइपजिगले अग्रताको...
इन्स्टाग्राममा आपत्तिजनक शब्द पोस्ट गरेको भन्दै कभानीलाई तीन खेलको प्रतिबन्ध
काठमाडौं &ndash; म्यान्चेष्टर युनाइटेडका फरवार्ड एडिनसन कभानीलाई तीन खेलको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा आपत्तिजनक शब्द पोस्ट गरेको भन्दै उरुग्वेका यी फरवार्डलाई ३ खेलको प्रतिबन्धसहित १ मिलियन पाउण्ड आर्थिक जरिमाना गरिएको हो । ३३ वर्षिया फरवार्डले अपमानजनक र अनुचित शब्द प्रयोग गर्ने आरोपमा फुटबल एसोसियनले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ...
पिएम कप : प्रदेश १द्वारा गण्डकी १ सय ४० रनले पराजित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा प्रदेश १ले गण्डकी प्रदेशलाई १ सय ४० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । दाङको लमहीमा प्रदेश १ ले दिएको १ सय ४८ रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी प्रदेश ८ ओभरमा ७ रन बनाउँदै अलआउट भयो । गण्डकी प्रदेशका नौ जना खेलाडी शून्यमा आउट भए...
कोहलीलाई पछि पार्दै न्युजिल्याण्डका केन विलियम्सनले लिए अग्रता
काठमाडौँ ।आईसीसी टेष्ट बरियतामा भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै न्युजिल्याण्डका केन विलियम्सन शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् । ८ सय ९० अंक बटुल्दै विलियम्सन बरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन । कोहली ८ सय ७९ अंकका साथ दोस्रो र अष्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथ ८ सय ७७ अंकका तेस्रो स्थानमा छन्...
पिएम कप :प्रदेश १ द्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश पाँच विकेटले पराजित
काठमाडौँ ।दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा प्रदेश १ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पाँच विकेटले हराएको छ । लगातार दोस्रो जितसँगै प्रदेश १ को सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बढेको छ । सुदूरपश्चिमले दिएको ५४ रनको लक्ष्य प्रदेश १ ले १५ ओभर १ बलमा ५ विकेट गुमाएर भेटायो । प्रदेश १ को लागि...
जारी प्रिमियर लिगका १८ खेलाडी तथा स्टाफलाई कोरोना पुष्टि
काठमाडौँ ।जारी प्रिमियर लिगको पछिल्लो परीक्षणमा १८ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।खेलाडीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकै कारण सोमबारका लागि तय भएको म्यानचेष्टर सिटी र एभरटनबीचको खेल अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । संक्रमित हुनेमा खेलाडी तथा स्टाफ रहेको प्रिमियर लिगले जनाएको छ । पोजेटिभ देखिएका खेलाडी र क्लब स्टाफ सबै जना...
पिएम कप : समूह ‘बी’ अन्तर्गत भएको खेलमा सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशलाई हराँउदै विजयी सुरुवात गरेको छ । समूह &lsquo;बी&rsquo; अन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई ५९ रनले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो । खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको १ सय ८ रनको लक्ष्य गण्डकीले निर्धारित २० ओभर पूरै...
पिएम कप : प्रदेश २द्वारा कर्णाली फराकिलो अन्तरले पराजित
काठमाडौँ ।दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश २द्वारा कर्णाली फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ । कर्णालीलाई १ सय ४३ रनले पराजित गर्दै प्रदेश २ सान्त्वना जित हासिल हासिल गर्न सफल भएको छ । &nbsp;पहिलो खेलमा प्रदेश २ ले प्रस्तुत गरेको १ सय...
प्लेअर अफ दि डिकेडको उपाधि कोहलीको हातमा
काठमाडौँ । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले आईसीसी प्लेअर अफ दि डिकेडको ९दशककै उत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा दुई अवार्ड जितेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले सोमबार घोषणा गरेको अवार्डमा कोहलीले प्लेअर अफ दि डिकेड र एक दिवसीय क्रिकेटमा दशककै उत्कृष्ट खेलाडी ओडीआई प्लेअर अफ दि डिकेडको अवार्ड जितेका हुन्। यस्तै अष्ट्रेलियाका स्टिभ...
सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो २१औं शताब्दीकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित
काठमाडौं - पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो २१औं शताब्दीकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । युएईको दुबईमा आइतबार भएको ग्लोब सकर अवार्डमा रोनाल्डोले प्लेअर अफ दि सेन्चुरीक अवार्ड जिते । उनले यसका लागि लिओनल मेस्सी, मोहम्मद सालाह र रोनाल्डिन्होलाई पछि पारे । दुबईमा भएको एक अवार्ड कार्यक्रममा रोनाल्डो सन् २००१ देखि २०२० सम्मको...
वेष्टब्रोमसँग लिभरपुल बराबरीमा रोकियो
काठमाडौं &ndash; साविक विजेता लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा वेष्टब्रोमसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ । गएराती भएको खेलमा सुरुमा अग्रता लिएर पनि त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा लिभरपुलले वेष्टब्रोमसँग १&ndash;१ को बराबरी खेलेको हो । घरेलु मैदान एनफिल्डमा भएको खेलको १२औं मिनेटमा साडियो मानेले जोएल मातिपको पासमा गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए...
एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा, कर्णाली र प्रदेश २ प्रतियोगिताबाट बाहिरिए
काठमाडौँ ।जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको छ ।आइतबारको दोस्रो खेलमा एपीएफले प्रदेश २ लाई ८ विकेटले पराजित गरेसँगै एक खेल अगावै एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका छन् । लगातार दुई- दुई खेलमा पराजित हुन् पुगेका कर्णाली र प्रदेश २ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका...
चेल्सीमाथि आर्सनलको ३–१ को जित
काठमाडौं &ndash; प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको लण्डन डर्बी खेलमा आर्सनलले चेल्सीमाथि शानदार जित हात पारेको छ । घरेलु मैदान एमिरेट्स स्टेडियममा भएको खेलमा आर्सनलले चेल्सीलाई ३&ndash;१ ले पराजित गरेको हो । यस सिजन खराब प्रदर्शन गरिरहेको आर्सनललाई लण्डन डर्बी जितले राहत मिलेको छ । खेलको ३४औं मिनेटमा अलेक्जान्डर लाकाजेटले गोल...
प्रदेश २ लुम्बिनीद्वारा ९ विकेटले पराजित : प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी-ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th December 2020
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी-ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश २ लुम्बिनी प्रदेशद्वारा ९ विकेटले पराजित भएको छ ।दाङको देउखुरी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश २ ले दिएको ७८ रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले १६ ओभर १ बलमा मात्रै १ विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो । लुम्बिनीका लागि गीता गोसाइले २३, सरस्वती जीएमले २२ र...
माघको पहिलो सातादेखि प्रदेशस्तरीय लिग सञ्चालन गर्ने तयारीमा एन्फा
काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले माघको पहिलो सातादेखि प्रदेशस्तरीय लिग सञ्चालन गर्ने भएको छ।एन्फले तीन वटा प्रदेशमा लिग सञ्चालन गर्ने भएको हो । जसमा प्रदेश २, बागमती प्रदेश र सूदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । बिहीबार एन्फाले प्रदेश फुटबलका प्रतिनिधिसँग एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा छलफल गरेको थियो।एन्फा उपाध्यक्ष वीरबहादुर...
पीएसजीलाई लगातार दुई पटक लिग जिताएका टुचेल बर्खास्त
काठमाडौँ । पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीका प्रशिक्षक थोमस टुचेल बर्खास्त भएका छन् ।क्लबका निर्देशक लियोनार्दोले प्रशिक्षक टुचेललाई बर्खास्त गरेका हुन् । पीएसजीलाई लगातार दुई पटक लिग जिताएका टुचेल र क्लबका निर्देशक लियोनार्दोबीच पछिल्लो समय मनमुटाव हुँदै आएको थियो । जर्मन प्रशिक्षक टुचेल सन् २०१८ को मेदेखि पीएसजीको प्रशिक्षक रहेका थिए । टुचेलको...
फिफाद्वारा उमेर समूहको विश्वकप रद्द गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । फिफाले सन् २०२१ मा हुने भनिएको उमेर समूहको विश्वकप रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजनाका लागि चुनौती थपिएको भन्दै फिफाले उमेर समूहका दुई ठूला प्रतियोगिता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । २० वर्षमुनीको विश्वकप इन्डोनेसिया र १७ वर्षमुनीको विश्वकप पेरुमा गर्ने तयारी थियो...
सोमपाल, कुशल र करण टी–१० लिगमा छनोट
काठमाडौँ - नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका तीन खेलाडी सोमपाल कामी, करण केसी र कुशल मल्लले यूएईमा हुने टी&ndash;टेन लिगमा खेल्ने भएका छन् । दस ओभरको फ्रेन्चाइज लिगमा उनीहरूले खेल्न लागेको यो पहिलो पल्ट हो । बुधबार रातिको ड्राफ्टबाट उनीहरूको अनुबन्ध निश्चित भएको हो । त्यस अनुसार सोमपालले मराठा अरबियन्स, करणले पुने...
मेसीले तोडे ब्राजिलियन लेजेन्ड पेलेको कीर्तिमान
काठमाडौं &ndash; लिओनल मेसीले बार्सिलोनाका लागि ६४४औं गोल गोल गर्दै एकै क्लबका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने ब्राजिलियन महान खेलाडी पेलेको कीर्तिमान तोडेका छन् । अघिल्लो खेलमा भ्यालेन्सियाविरुद्ध १ गोल गर्दै पेलेको कीर्तिमान बराबरी गरेका मेसीले गएराति बार्सिलोनाले रियल भाल्लाडोलिडलाई ३&ndash;० ले पराजित गर्दा एक गोल गर्दै उक्त कीर्तिमान आफ्नो नाममा बनाएका...
महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर २ बीच प्रतिस्पर्धा
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक भएको छ । जस अनुसार खेल पुस ११बाट सुरु हुने छ ।क्यानले महिलातर्फको तालिका सार्वजनिक गरेको हो । उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ । २० ओभरमा हुने प्रतियोगिता दाङको लमहीमा यही ११...
पुस ११बाट सुरु हुने महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक
आईओसीको सहयोगमा नेपाली खेलकुदको डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने
काठमाडौँ ।अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीको सहयोगमा नेपाली खेलकुदको डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अभिलेखीकरणको परियोजनाको थालनी भएको जनाएको छ । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले परियोजना ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । खेलकुदको इतिहासलाई जगेर्ना गर्न सङ्ग्रहालयको परियोजना सफल हुने उहाँको भनाइ थियो...
नेपाली कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु
काठमाडौँ । सानेपामा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पार्टी कार्यालय, सानेपामा सुरु भएको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टीका नेता सहभागी छन् । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)का नेताहरु भने सहभागी छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी...
रफाएल लेआओले खेलको ६ सेकेन्डमै गोल गरेर बनाए नयाँ कीर्तिमान
काठमाण्डौँ ।आइतबार राति भएको लिगको खेलमा इटालियन सिरि एु मा पोर्चुगिज फरवार्ड रफाएल लेआओले कीर्तिमानी गोल गरेका छन्। लेआओले खेलको ६ सेकेन्डमै गोल गरेका थिए। यो गोल सिरि ए इतिहासकै सबैभन्दा छिटो हो। इटालियन लिग लिडर एसी मिलानका फरवार्ड लेआओले सासुओलोविरुद्धको खेलमा कीर्तिमान गोल गरेका हुन्। खेलमा एसी मिलान २-१ गोलले...
म्यानचेष्टर युनाइटेडद्धारा शेफिल्ड ३–२ ले पराजित
काठमाडौं &ndash; मार्कुस रासफोर्डले दुई गोल गरेपछि म्यानचेष्टर युनाइटेडले प्रिमियर लिगमा शेफिल्ड युनाइटेडलाई ३&ndash;२ ले पराजित गरेको छ । घरेलु मैदानमा शेफिल्डले पहिले अग्रता लिएपनि युनाइटेडले पुनरागमन गर्दै तीन गोल गरेको हो । शेफिल्डका लागि डेभिड म्याकगोल्ड्रिकले दुवै गोल गरे । घरेलु मैदानमा ब्रामल लेनमा म्यकगोल्ड्रिकले खेलको पाँचौ मिनेटमै गोल गर्दै...
शृंखला खतिवडादेखि बडी बिल्डर महेश्वर महर्जनसम्म क्रिकेट मैदानमा
काठमाडौं &ndash; गायक प्रकास सपूत, तेक्वान्दो खेलाडी संगीना बैद्य, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त, स्ट्यान्ड अप कमेडियन सन्दिप क्षेत्री जब क्रिकेट मैदानमा उत्रनेछन्, उनीहरुबीचको घम्साघम्सी कस्तो हुन्छ होला ? फरक क्षेत्रमा परिचित यी अनुहारहरुले क्रिकेटमा आफ्नो क्षमता कसरी देखाउँलान् ? उत्सुकता मेट्न माघ २४ गतेसम्मको मिति कुर्नुपर्नेछ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकास्थित निर्माणधिन गौतमबुद्ध...
एलपीएलको उपाधिका लागि जाफ्ना र गाल्ले भिड्दै
काठमाडौं &ndash; श्रीलंकामा भइरहेको पहिलो संस्करणको लंका प्रिमियर लिग (एलपीएल) टी २० क्रिकेटको उपाधिका लागि जाफ्ना स्टालियन्स र गाल्ले ग्लाडिएटर्स भिड्ने भएका छन् । सोमबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा दम्बुलाई भाइकिंग्सलाई पराजित गर्दै जाफ्नाले गाल्लेसँग उपाधि भेट पक्का गरेको हो ।लिगमा चौथो भएको गाल्लेले लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको कोलोम्बो किंग्सलाई...
लिभरपुलका पूर्व व्यवस्थापक जेरार्ड हुलियरको निधन
पेरिस &mdash; लिभरपुलका पूर्व फ्रान्सेली व्यवस्थापक जेरार्ड हुलियरको सोमबार निधन भएको छ । उनी ७३ वर्षका थिए र पछिल्लो समय बिरामी थिए । केही दिन अगाडि मात्र उनको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको थियो । हुलियर फ्रान्सेली राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक समेत रहे । यस्तै उनले पेरिस सेन्ट जर्मेन र लियोन पनि सम्हाले । सन्...
इटालियन लेजेण्ड फुटबलर रोसीको निधन
काठमाडौं &ndash; इटालियन लेजेण्ड तथा फिफा विश्वकप फुटबलको विजेता पाउलो रोसीको निधन भएको छ । रोसीको ६४ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको हो । उनले काम गरेको आरएआई टीभीले रोसीको निधनको खबर सार्वजनिक गरेको हो । युभेन्ट्स र एसी मिलानका पूर्व खेलाडी समेत रहेका रोसीले सन् १९८२ मा विश्वकप जितेका थिए । उनलाई...
नेमारको ह्याट्रिकसँगै बासाकसेयरमाथी पीएसजीको शानदार जित
काठमाडौं &ndash; ब्राजिलियन स्टार नेमारले ह्याट्रिक गरेपछि युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले शानदार जित हात पारेको छ । अघिल्लो दिन रंगभेदी दुर्व्यवहारका कारण बिचमै स्थगित भएपछि गएराति फेरि खेलाइएको खेलमा पीएसजीले टर्किस क्लब इस्तानबुल बासाकसेयरलाई ५&ndash;१ ले पराजित गरेको हो । मंगलबार राति भएको खेलमा बासाकसेयरका सहायक प्रशिक्षक...
रोनाल्डोको २ गोलसँगै बार्सिलोनामाथी युभेन्ट्सको शानदार जित,घरेलु मैदानमै गोल गर्न सकेनन् मेसी
काठमाडौं &ndash; युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोनालाई उसैको मैदानमा पराजित गर्दै युभेन्ट्स समूह जी को विजेता बनेको छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोको दुई पेनाल्टी गोल मद्दतमा युभेन्ट्सले क्याम्प नोउमै बार्सिलोनालाई ३&ndash;० ले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदानमा पहिलो लेगको खेलमा २&ndash;० ले गुमाएको युभेन्ट्सलाई समूह विजेता बन्न कम्तीमा ३&ndash;१ को जित...
मेसी–रोनाल्डो दुई वर्षपछि एकअर्काविरुद्ध भिड्दै
काठमाडौं &ndash; युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत मंगलबारबाट समूह चरणका अन्तिम खेल सुरु हुँदैछन्। केही टिमले समूह चरणको अन्तिम खेलअघि नै नकआउट चरणमा स्थान पक्का गरिसकेका छन् भने केही टिमका लागि अन्तिम खेल निर्णायक बन्दैछन्। यस्तै समूह चरणको अन्तिम खेलबाट समूह विजेता र उपविजेता पनि टुंगो लाग्दैछ। सिजनको समूह चरणको अन्तिम खेल मध्ये स्पेनिस...
अन्तिम समयमा हानेको गोलले मान्यता नपाए पनि म्यानचेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमै
काठमाडौं &ndash; अन्तिम समयमा गरेको गोलले मान्यता नपाए पनि म्यानचेस्टर सिटी समूहको शीर्ष स्थानमा कायम रहन सफल भयो । च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा समूह सी को म्यानचेस्टर सिटी एफसी पोर्टोसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो । थप खेलाडीका रुपमा मैदान आएका गाब्रियल जिससले अन्तिम समयमा गोल गरेका थिए । तर...
प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौंमा हुँदै
काठमाडौं &ndash; प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट अर्को महिना हुने भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता पुस ११ गतेदेखि काठमाडौंमा गर्ने गरी तयारी सुरु गरिसकेको छ । पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि क्यानले खेलाडी छनोट गर्न जिल्ला क्रिकेट संघलाई पत्राचार गर्दै सम्पूर्ण प्रादेशिक क्रिकेट संघलाई पनि बोधार्थ...
शाख्तरसँग रियल मड्रिड २–० ले पराजित
काठमाडौं &ndash; अन्तिम १६ मा स्थान बनाउने सम्भावना जीवित रहे पनि सो सम्भावना बलियो बनाउने मौका रियल मड्रिडले गुमाएको छ । च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा शाख्तर डोनेस्कसँग रियल मड्रिड २&ndash;० ले पराजित भएको छ । अवे मैदानमा भएको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा दोस्रो हाफमा रियल मड्रिडले दुई...
काठमाडौँ &mdash; नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य भएका छन् । एएफसी क्लब प्रतियोगिताका लागि न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसकेका कारण नेपाली क्लबले एसियाली फुटबल महासंघको आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका हुन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले नेपाली क्लबलाई लाइसेन्स दिनका लागि एएफसीलाई...
लापरवार्हीका कारण म्याराडोनाको निधन भएको आशंका,चिकित्सक लुकको घर तथा क्लिनिकमा प्रहरीको छापा
काठमाडौं &ndash;आर्जेन्टीनाका महान् फुटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको उपचारमा लापरबाही भएको थियो कि भनेर अधिकारीहरूले छानबिन थालेका छन्। उनका छोरीहरूले उनको उपचारबारे प्रस्ट जानकारी माग गरेका छन्। केही समय अगाडि मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गराएका म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा हृदयाघातबाट गत बुधवार निधन भएको थियो। म्याराडोनाका छोरीहरूले आफ्ना पिताको उपचारबारे प्रश्न उठाउँदै बयान दिएका थिए।...
कोरोना संक्रमित भएपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना
काठमाडौं &ndash;नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। कोरोना संक्रमित भएपछि ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएका उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको उनका म्यानेजर रमन सिवाकोटीले जानकारी दिए। उनले सन्दीपलाई अस्पतालको कोभिड क्याबिनमा भर्ना गरिएको र अवस्था सामान्य रहेको बताए। बिहान मात्र कुरा भएको थियो। सबै सामान्य छ, उनले भने। सिवाकोटीका अनुसार शरीर अलिक कमजोर...
दिवंगत म्याराडोनालाई मेसीको भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली
म्याड्रिड &mdash; स्पेनी ला लिगामा बार्सिलोनाले आइतबार ओसासुनालाई सजिलै ४&ndash;० ले हरायो र त्यसमा लियोनल मेसीले दिवंगत डिएगो म्याराडोनामाथि भावपूर्ण श्रद्धाञ्&zwj;जली प्रकट गरेका छन् । टिमका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मेसीले दोस्रो हाफमा व्यक्तिगत उत्कृष्ट गोल पनि गरे । बार्सिलोनाका लागि मार्टिन ब्रेथ्वाइट, एन्टोन ग्रिजमन र फिलिपे कोउटिन्होले पनि गोल गरे ।...
महरेजको ह्याट्रिकसँगै वर्नलीमाथि म्यानचेस्टर सिटीको ५ गोलको वर्षा
काठमाडौं &ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले वर्नलीमाथि सानदार जित हात पारेको छ। सिटीले शनिबार भएको खेलमा वर्नलीलाई ५&ndash;० गोलले पराजित गरेको हो। सिटीका लागि रियाद महरेजले ह्याट्रिक गरे। उनले खेलको छैटौं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दा २२ मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर पारे। त्यसपछि सिटीका लागि ४१ मिनेटमा मेन्डेले तेस्रो गोल...
लिभरपुल र ब्राइटन १–१ को बराबरीमा रोकिए
काठमाडौं &ndash; साविक विजेता लिभरपुल ब्राइटनसँग बराबरीमा रोकिए पनि प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । शनिबार भएको खेल भिएआर रेफ्रीले लिभरपुलको दुई गोललाई मान्यता नदिँदा ब्रायटनसँग १&ndash;१ को बराबरीमा रोकिएको हो । ब्राइटनले घरेलु मैदानमा लिभरपुललाई पहिलो हाफमा बराबरिमा रोकेको थियो । तर डिएगो जोटाले गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका...
तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्टलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं - ओलम्पियन एवं तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्ट कोरोना भाइरस सड्क्रमित भएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका पूर्वध्यक्ष समेत रहेका विष्टले आफू कोरोनाबाट सड्क्रमित भएको आज सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।उनीसहित परिवारका ६ जनामा कोरोना सड्क्रमण देखिएको छ। परिवारका अन्य सदस्य भने कोरोनामुक्त भइसकेका विष्टले जानकारी दिएका छन्। सड्क्रमणबाट जोगिन शारीरिक...
एट्लान्टाद्धारा लिभरपुल २–० ले पराजित
एजेन्सी &ndash; इंग्लिस क्लब लिभरपुललाई इटालियन क्लब एट्लान्टाले स्तब्ध पारेको छ । च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबार राति भएको समूह डी को खेलमा एट्लान्टाले लिभरपुललाई उसकै मैदानमा २&ndash;० ले पराजित गरेको हो । एट्लान्टाले दोस्रो हाफमा चार मिनेटको अन्तरालमा दुई गोल गरेको हो । भ्रमण टोली एट्लान्टाका लागि जोसिप इलिसिक र...
च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा स्थान बनाउने मिलानको सपनामा गम्भीर धक्का
काठमाडौं &ndash; च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणमा स्थान बनाउने इटालियन क्लब इन्टर मिलानको सपनामा गम्भीर धक्का लागेको छ । समूह बी अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिडले इन्टर मिलानलाई उसकै मैदानमा २&ndash;० ले पराजित गरेको हो । घरेलु टोली मिलान ३३ औँ मिनेटमा अटुरो भिडाल दोहोरो पहेँलो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएपछि...
काठमाडौं &ndash; अर्जेन्टिनाका लेजेण्ड फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ । कार्डिक अरेस्टका कारण उनको ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। घरमै रहेका बेला उनलाई हृदयघात भएको हो । दुई हप्ता पहिले ब्लड कल्ट बनेपछि उनको मस्तिष्कको शल्यक्रिया भएको थियो । म्याराडोनालाई विश्वका सर्वकालिन सर्वोत्कृष्ट फुटबलरका रुपमा लिइन्छ । बिस्तारित खेल जीवनमा...
च्याम्पियन्स लिगमा सबैभन्दा छिटो १५ गोल पूरा गर्ने खेलाडी बने हालान्ड
काठमाडौं &ndash; एर्लिन हालान्डले दुई गोल गरेपछि जर्मन क्लब बरुसिया डर्टमण्डले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूह एफको खेलमा क्लब ब्रुगमाथि सहज जित हात पारेको छ । गउराति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा डर्टमण्डले बेल्जियन क्लब ब्रुगलाई ३&ndash;० ले पराजित गरेको हो । सिग्नल इडुना पार्कमा भएको खेलमा हालान्डले १८औं मिनेटमा गोल गर्दै...
बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका क्रिकेट खेलाडीहरुको स्वाब संकलन
काठमाडौं &ndash; अभ्यासका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरुको मंगलबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिकाबिच अभ्यास सुरु गरेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरुको स्वाब लिएको हो । मंगलबार टिमका सदस्य, फिजियोथेरपिस्ट र प्रशिक्षक गरि १९ जनाको पीसीआर...
बर्नलीले ग¥यो सिजनको पहिलो जित दर्ता
एजेन्सी &ndash; बर्नलीले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको यो सिजनमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ । लिग अन्तर्गत सोमबार राति भएको खेलमा बर्नलीले क्रिष्टल प्यालेसलाई १&ndash;० ले पराजित गरेको हो । आठौँ मिनेटमा क्रिस वूडले गरेको गोलबाट जित निश्चित गरेको बर्नलीले रेलिगेशन जोनबाट माथि उक्लिएको छ। ८ खेलबाट पाँच अंक जोडेको बर्नली...
लयमा रहेका इब्राहिमोभिचको २ गोलसँगै नापोलीमाथि मिलानको ३–१ को जित
एजेन्सी &ndash; उत्कृष्ट लयमा रहेका ज्लाटन इब्राहिमोभिचले गरेको दुई गोल प्रेरित एसी मिलानले गएराति १० खेलाडीमा सीमित नापोलीमाथि ३&ndash;१ को विजय हासिल गरेको छ। जितसँगै मिलान इटालियन सिरी &lsquo;ए&rsquo; को शीर्ष स्थानमा कायमै छ। ३९ वर्षे फरवार्ड इब्राहिमोभिचले जारी सिजन ६ लिग खेलमा १० गोल गरिसकेका छन्। तर, दोस्रो हाफमा ह्यामस्ट्रिङ...
क्यानको बन्द प्रशिक्षण शिविरमा २३ खेलाडी
कठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले यही मंसिर १० देखि काठमाडौंमा बन्द प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । आज सूचना जारी गदैृ क्यान २३ जना खेलाडीको नाम प्रकाशन गरेको छ । शिविर सञ्चालन गर्नुपूर्व क्यानले मंसिर ८ गते बन्द प्रशिक्षणमा भाग लिने खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई पीसीआर गरिने भएकाले संघमा सम्पर्क गर्न...
बंगलादेशमा रहेका सबै फुटबल खेलाडीको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट आयो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th November 2020
कात्तिक ३०,काठमाडौं । दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि बंगलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आइतबार टोलीका २५ खेलाडीसहित नेपाली टिमसबैको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ । नेपालले शुक्राबार बंगलादेशसंग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नुअघि एक खेलाडीलाई कोरोना पोजेटिभ...
तीन महिना भन्दा बढी समय पछि स्वदेश फर्किए सन्दीप
कात्तिक २७, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी&ndash;२० क्रिकेटको १३ औं संस्करणमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय टिमका सदस्य सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किएका छन् । दिल्ली क्यापिटल्सका खेलाडी सन्दीप बिहीबार बिहान नेपाल आइपुगेका हुन् । युएईमा भएको आईपीएलमा दिल्लीले फाइनलसम्म पुग्दा १७ खेल खेल्दा सन्दीपले एक खेल पनि खेल्न पाएनन् ।...
बंगलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका एक खेलाडीमा कोरोना संक्रमण
कात्तिक २७, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका एक खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । ढाकामा बुधबार गरिएको कोरोना परिक्षणमा एक खेलाडीको नतिजा पोजेटिभ आएको हो । अन्य खेलाडीको नतिजा भने नेगेटिभ आएको छ । संक्रमण पुष्टि भएका खेलाडीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । उनको...
नेपालकी सुदेशना गुरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल तेक्वान्दो प्रतियोगितामा रजत
काठमाडौं । नेपालकी सुदेशना गुरुङले प्रथम अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल तेक्वान्दो प्रतियोगितामा रजत जितेकी छिन् । सुदेशनाले महिला एकल पुम्सेको यु&ndash;१५ उमेरसमूहमा रजत जितेको नेप्लिज तेक्वान्दो एकेडेमीका अध्यक्ष अशोक खड्काले जनाएका छन् । प्रतियोगितामा सुदेशनाले ६.७५ अंक जोडन सफल भएकी थिइन् । यो स्पर्धामा नेपालका अन्य दुई खेलाडीले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए...
इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसको सानदार जीत
एजेन्सी &ndash; इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसले यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बुधबार हंगेरीको फेरेन्कभारोसलाई ४-१ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । युभेन्टसको जितमा अल्भारो मोराटाले दुई तथा पाउलो डिबालाले १ गोल गरे । अर्को गोल आत्मघाती गोल रहयो । खेलको सातौं मिनेटमा नै पाहुना टोली युभेन्टसले मोराटाको गोलमा अग्रता लियो ।...
च्याम्पियन्स लिगः फेरेन्सभारोसीमाथी युभेन्टसको शानदार जित
एजेन्सी - इटालियन क्लब युभेन्टसले च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा शानदार जित दर्ता गरेको छ । अवे मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टसले फेरेन्सभारोसी टिसीलाई ४&ndash;१ ले पराजित गरेको हो । युभेन्टसको जितमा अल्भारो मोराटाले दुई तथा पाउलो डिबालाले एक गोल गरे । टिसीका डिभालीले आत्मघाती गोल गरे । टिसीका...
आईपीएल टी-ट्वान्टीमा आज मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल भिड्दै
काठमाडौँ- यूएईमा जारी १३औँ संस्करणको आईपीएल टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटलबीच खेल हुँदैछ । जारी आईपीएलको क्वालिफायर&ndash;१ को खेल नेपाली समयानुसार बेलुकी ७:४५ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ । साविक विजेता मुम्बई अंक तालिकाको शीर्षस्थान रहँदै क्वालिफायरमा पुगेको हो । उसले कूल १८ अंक जोडेको छ...
आईपीएलमा तीन स्थानका लागि ६ टिमको प्रतिस्पर्धा
कात्तिक १६, काठमाडौं । मुम्बई इन्डियन्स जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को क्वालिफायरमा पुगेको छ । शनिबार दिल्ली क्यापिटललाई पराजित गरेर मुम्बईले क्वालिफायर यात्रा निश्चित गरेको हो । १३ म्याचबाट १८ अंक जोडेको मुम्बईसँग क्यालिफायर&ndash;१ मा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानका रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलौर र दिल्लीबीचको विजेताले खेल्नेछ । १३&ndash;१३ म्याचबाट समान...
राजस्थानसँग पन्जाब ७ विकेटले पराजित,स्टोक्स बने म्यान अफ द म्याच
काठमाडौं - राजस्थान रोयल्सले किंग्स इलाभेन पन्जाबलाई सात विकेटले हराएको छ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएरातिको खेलमा राजस्थानले १८६ रनको लक्ष्य १८ औं ओभरमा तीन विकेट गुमाएर भेटायो । राजस्थानको जितमा बेन स्टोक्सले सबैभन्दा धेरै ५० रन योगदान गरे । अल राउन्ड प्रदर्शन गरेका उनी म्यान अफ द म्याच...
टी–२० मा क्रिस गेलले बनाए १००० छक्काको कीर्तिमान
काठमाडौं - इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)अन्तर्गत शुक्रबारको म्याचमा राजस्थान रोयल्ससँग सात विकेटले पराजित भएपछि किंग्स इलाभेन पञ्जाबको प्लेअफ यात्रा कमजोर बनेको छ । पञ्जाबका लागि ८ छक्कासहित ९९ रन जोडेका क्रिस हेनरी गेलले भने टी&ndash;२० क्रिकेट इतिहासमा अर्को कीर्तिमान बनाएका छन् । अबुधाबीस्थित शेख जायद रंगशालामा राजस्थानविरुद्ध सातौं छक्का प्रहार गरेपछि...
राष्ट्रिय फुटबल टोलीका ४ खेलाडीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ &ndash; नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चार खेलाडी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले बिहीबाररदेखि प्रशिक्षणमा बोलाइएका ३४ खेलाडीमध्ये चार जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको जनाएको छ। कोरोना देखिएका चारै खेलाडी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। नेपालले बङ्गलादेशसितको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहीबारदेखि प्रशिक्षण शुरु गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा शुरु भएको...
आईपीएल : मुम्बईद्धारा बैंगलोर ५ विकेटले पराजित
काठमाडौं - इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएरातिको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई पाँच विकेटले हराएको छ । अबुधाबीमा भएको खेलमा मुम्बईसामु बैंगलोरले १६५ रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो । सो लक्ष्य मुम्बईले १९ ओभर १ बलमा पाँच विकेट गुमाएर भेटायो । यस जितसँगै मुम्बईले १६ अंकसहित अन्तिम चारमा स्थान...
पन्जाबद्धारा कोलकाता ८ विकेटले पराजित
काठमाडौं - आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा किंग्स इलाभेन पन्जाबले कोलकाता नाइटराइडर्सलाई आठ विकेटले हराएको छ । कोलकाताको तर्फबाट जितका लागि पाएको १५० रनको लक्ष्य पन्जाबले १९ औं ओभरमा २ विकेट गुमाएर हासिल गरेको थियो । पन्जाबको जितमा मन्दीप सिंह र क्रिस गेलले १०० रनको साझेदारी गरे । मन्दीप सिंहले नटआउट...
आईपीएल : मुम्बईले चेन्नाईलाई १० विकेटले हरायो
काठमाडौं - इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा मुम्बई इन्डियन्सले चेन्नाई सुपर किंग्सलाई १० विकेटले हराएको छ । मुम्बईले एक विकेट पनि नगुमाइ १२.२ ओभरमा ११५ रनको लक्ष्य पूरा गर्यो । मुम्बईको जितमा इशान किसन ६८ र क्विन्टन डिकक ४६ रनमा नटआउट रहे । यो जितसँगै मुम्बई अंक तालिकामा १४ अंकसहित...
पन्जाबविरुद्ध चेन्नाईको शानदार जित
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा चेन्नाई सुपर किंग्सले १० विकेटको शानदार जित हासिल गरेको छ । किंग्स इलाभेन पन्जाबले दिएको १७९ रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नाईले विना विकेटको क्षतिमा १७.४ ओभरमा पूरा पर्यो । चेन्नाइको जितमा ओपनरद्वय शेन वाटसन र फाप डु प्लेसिसले १८१ रनको साझेदारी गरे...
आईपीएल : कोलकातालाई १८ रनले पराजित गर्दै दिल्ली शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएराति भएको रोमाञ्चक खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई १८ रनले हराएको छ । दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा कोलकातासामु २२९ रनको विशाल लक्ष्य राखेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको कोलकातालाई दिल्लीले ८ विकेटको क्षतिमा २१० रनमा रोक्यो । यो जितसँगै दिल्ली अंक तालिकाको...
आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नाईको लगातार तेस्रो हार
काठमाडौं- इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी&ndash;ट्वान्टी क्रिकेटअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदरावाद विजयी भएको छ । यूएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा भएको खेलमा हैदरावादले गत वर्षको उपविजेता चेन्नई सुपरकिङ्सलाई मात्र सात रनले पराजित गर्न सफल भयो । प्रतियोगितामा हिजो आफ्नो दोस्रो जित हात पारेको हैदरावादले हालसम्म चार खेल खेल्दा दुईमा हार र...
हाइफामाथि ७–२ को जित दर्ता गर्दै टोटनह्याम युरोपा लिगको समूह चरणमा प्रवेश
एजेन्सी &ndash; माकाबी हाइफामाथि शानदार जित दर्ता गरी टोटनह्याम युरोपा लिग फुटबलको समूह चरणमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार राति भएको छनौट चरणको प्लेअफ खेलमा टोटनह्यामले माकाबी हाइफलाई ७&ndash;२ ले पराजित गरेको हो। टोटनह्यामका लागि ह्यारी केनले तीन, लो सेल्सोले दुई तथा लुकास मौरा र डेल अलीले एक एक गोल गरे । माकाबीका...
सेल्टामाथी बार्सिलोनाको शानदार जित,ओलाजाको आत्मघाती गोल
एजेन्सी &ndash; बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलको आफ्नो दोस्रो खेलमा प्रभावशाली जित दर्ता गरेको छ । लिग अन्तर्गत बिहीबार राति अवे मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले सेल्टा डी भिगोलाई ३&ndash;० ले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको जितमा आन्शु फाती र सर्गेइ रोबर्टोले गोल गरे । सेल्टा डी भिगोका लुकास ओलाजाले आत्मघाती गोल...
आईपीएल : साविक विजेता मुम्बईद्धारा पन्जाब ४८ रनले पराजित
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएरातिको खेलमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले किंग्स इलाभेन पन्जाबलाई ४८ रनले हराएको छ । मुम्बईले दिएको १९२ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पन्जाबको टोलीले ८ विकेटको क्षतिमा १४३ रन मात्र बनाउन सक्यो । जारी आईपीएलमा मुम्बईको यो दोस्रो जित हो । पन्जाबका लागि निकोलस पुरनले...
आईपीएल : राजस्थानलाई १३७ रनमा समेट्दै कोलकाता ३७ रनले विजयी
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले राजस्थान रोयल्सको विजयी यात्रामा रोक लगाइदिएको छ । बुधबार राति दुबईमा राजस्थानविरुद्धको खेलमा कोलकाता ३७ रनले विजयी भयो । राजस्थानको यो पहिलो हार हो । कोलकाताले दिएको १७५ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको राजस्थान, निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १३७ रनमा समेटियो...
मेस्सी भन्छन्-'मैले सबै बार्सिलोनाका लागि गरेको हुँ'
काठमाडौं &ndash; स्पेनिस महारथी बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले आफ्नो प्राथमिकतामा क्लब रहेको बताएका छन् । अगस्टको मध्यतिर बार्सिलोना छाड्न क्लबलाई मेल पठाएका मेस्सीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा बार्सिलोना नै रहेको बताएका छन् । उनले क्लबसँगको सम्बन्ध जे जस्तो भए पनि यो सिजन बार्सिलोनाबाट राम्रोसँग बिताउने बताएका छन् । &lsquo;जति धेरै असहमति भए पनि मैले...
लिभरपुलका मिडफिल्डर थियागोलाई कोरोना पुष्टि
काठमाडौं &ndash; प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका मिडफिल्डर थिआगो अलकान्त्रालाई नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण देखिएको छ । २९ वर्षीय मिडफिल्डरलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । यही सिजनमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखबाट लिभरपुलमा अनुबन्ध भएका उनले लिभरपुलबाट डेब्यु गरिसकेका छन् । चेल्सीसँगको खेलमा टिमबाट डेब्यु...
हैदराबादसँग दिल्ली १५ रनले पराजित,रसिद खानको घातक बलिङ
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) क्रिकेटको यो सिजन दिल्ली क्यापिटल्सले पहिलो हार ब्यहोरेको छ। मंगलबार राती भएको खेलमा दिल्ली, सनराइजर्स हैदराबादसँग १५ रनले पराजित भएको हो। हैदराबादले भने लगातार दुई हारपछि पहिलो जित हात पारेको हो। सनराइजर्स हैदराबादले एक सय ६३ रनको लक्ष्य दिएपनि रसिद खानको बलिङ सामु दिल्लीका माथिल्लो...
आईपिएल : बैंगलोर र मुम्बईको रोमाञ्चक खेल,सुपर ओभरमा मुम्बई पराजित
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले मुम्बई इन्डियन्सलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बैंगलोरले ३ विकेटको क्षतिमा २०१ रन बनाएको थियो । २०२ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले ५ विकेटको क्षतिमा २०१ रन नै बनाएपछि खेल बराबरी भयो । आईपीएल इतिहासमा...
रोनाल्डोको प्रभावशाली प्रदर्शनका कारण युभेन्टस हारबाट जोगीयो
एजेन्सी &ndash; क्रिष्टियानो रोनाल्डोको प्रभावशाली प्रदर्शनका कारण युभेन्टस हारबाट जोगिएको छ। इटालियन सिरी ए फुटबल अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा युभेन्टस रोमासँग २&ndash;२ को बराबरीमा रोकियो । ३१ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टी तथा पहिलो हाफको इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा जोर्डन भेरेटाउटले रोमाका लागि गोल गरे । ४४ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा गोल...
आइपिएल : २२३ रन बनाएर पनि हार्‍यो पञ्जाब,राजस्थानको कीर्तिमानी जित
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको रोमाञ्चक खेलमा राजस्थान रोयल्सले किङ्गस इलाभेन पन्जाबलाई ४ विकेटले हराएको छ । १९.३ ओभरमा २२६ रन बनाएको राजस्थानले आईपीएलमा लक्ष्य पछ्याउँदै सबैभन्दा ठूलो जित हासिलको नयाँ रेकर्ड बनायो । यो रकर्ड बनाउन सबैभन्दा अहम् ब्याट्समान बने राजस्थानका राहुल तेवतिया । उनले १८ औं ओभरमा...
आईपीएल : कोलकाताद्धारा हैदरावाद ७ विकेटले पराजित
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले सनराइजर्स हैदरावादलाई सात विकेटले हराएको छ । अबुधाबीको मैदानमा हैदरावादले कोलकाता सामु १४३ रनको लक्ष्य दिएको थियो । सो लक्ष्य कोलकाताले १८ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर भेटायो । कोलकाताको जितको हिरो शुभमन गिल बने । उनले ६२ बलमा नटआउट ७० रन बनाएका...
चेन्नई ४४ रनले हराउदै आईपीएलमा दिल्लीको दोस्रो जित
इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलमा सन्दीप लामिछानेको टिम दिल्ली क्यापिटल्सले दोस्रो जित हात पारेको छ । राति भएको खेलमा दिल्लीले चेन्नईलाई ४४ रनले हराएको हो । चेन्नईले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १ सय ७५ रन बनायो । बलियो...
आईपीएल : मुम्बईद्धारा कोलकाता ४९ रनले पराजित
काठमाडौं &ndash; साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल २०२० मा पहिलो जित हात पारेको छ । उदघाटन खेलमै साविक उपविजेता चेन्नाई सुपर किंग्ससंग पराजित भएको मुम्बईले आफ्नो दोस्रो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ४९ रनले पराजित गरेको हो । कप्तान रोहित शर्माको शानदार अर्धशतक अनि बलरहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि मुम्बईले सहज...
आइपिएलः बैंग्लोरको विजयी सुरुवात ,हैदराबाद १० रनले पराजित
काठमाडौं &ndash; विराट कोहली कप्तानीको रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ । १३ औँ संस्करणको आइपिएल अन्तर्गत सोमबार राति भएको आफ्नो पहिलो खेलमा बैंग्लोरले सनराइजर्स हैदराबादलाई १० रनले पराजित गरेको हो । विराटको टिमले युजवेन्द्र चहल र नवदीप सैनीको कसिलो बलिङ्गको सहयोगमा हैदराबादमाथि जित निकालेको हो...
आईपीएलमा दिल्ली र पञ्जाबको रोमाञ्चक खेल : जित नजिक पुगेर पनि चुक्यो पञ्जाब
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत आइतबार भएको रोमाञ्चक खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले किंग्स एलेभेन पञ्जाबलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ । युएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा निर्धारित २० ओभरमा दुवै टोलीले समान १५७ रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो । जहाँ पञ्जावले पहिले ब्याटिङ गर्दै २ विकेट गुमाएर जम्मा २...
ब्रोममाथि एभर्टनको शानदार जित,लेविनको ह्याट्रिक
काठमाडौं &ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजनमा प्रभावशाली यात्राको क्रम एभर्टनले जारी राखेको छ। लिग अन्तर्गत शनिबार राति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा एभर्टनले वेष्ट ब्रोममाथि ५&ndash;२ को जित दर्ता गरेको हो । १० खेलाडीमा सीमित भएको वेष्ट ब्रोमलाई पराजित गर्ने क्रममा एभर्टनका डोमिनिक काल्भर्ट&ndash;लेविनले ३१, ६२ र ६६ औँ मिनेटमा गोल...
आईपीएलको पहिलो खेलमै मुम्बईलाई ५ विकेटले हराउँदै चेन्नाईको शानदार सुरुवात
काठमाडौं &ndash; आईपीएल क्रिकेटको पहिलो म्याचमा चेन्नाई सुपरकिंग्सले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सलाई पाँच विकेटले हराउँदै शानदार सुरुवात गरेको छ । अबुधाबीस्थित शेख जायद रंगशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १६२ रन बनाएको थियो । १६३ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको चेन्नाईले १९.२ ओभरमा ५ विकेट...
जिरोनामाथि बार्सिलोनाको ३–१ को जीत,मेस्सीले गरे दुई गोल
एजेन्सी &ndash; बार्सिलोनाले प्रि&ndash;सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा जिरोनामाथि ३&ndash;१ को जीत निकालेको छ । बार्सिलोनाको जितमा कप्तान लिओनेल मेस्सीले दुई तथा फिलिपे कोउटिन्होले १ गोल गरे । पहिलो रोजाईमा अनुभवी खेलाडी उतारेको बार्सिलोनाले खेलको सुरुवातदेखि नै बल पोसेसनमा पकड जमाउँदै जिरोनाविरुद्ध आक्रमण बुनेको थियो । २१औं मिनेटमा मेस्सीको उत्कृष्ट मुभपछि त्रिनकाओले मिलाएको पासमा...
क्रिष्टल प्यालेसमाथी बोर्नमाउथको ११–१० को जित दर्ता
एजेन्सी &ndash; लिग कप फुटबल (इएफएल कप) अर्थात काराबाओ कप अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा बोर्नमाउथले टाइब्रेकरमा क्रिष्टल प्यालेसमाथि ११&ndash;१० को जित दर्ता गरेको छ । निर्धारित समयको खेलमा दुवै तर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट लिइएको हो । बोर्नमाउथले अब तेस्रो चरणको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीसँग खेल्ने तय भएको छ...
काठमाडौं &ndash; ओलम्पियन एवं पूर्वपौडी खेलाडी नयना शाक्य कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकी छन्। शाक्यसँगै उनका श्रीमान् पूर्व बास्केटबल खेलाडी विकास शाही र छोरा इभान पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। ओलम्पियन शाक्यले तीनै जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको आज सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएकी हुन्। पहिलो पटक परीक्षण गराउँदा नतिजा नेगेटिभ आएको र दोस्रो...
मार्सेसँग पिएसजी १–० ले पराजित,नेमारसहित पाँच खेलाडीले पाए रातो कार्ड
काठमाडौं &ndash; स्टार खेलाडी नेमारसहित पाँच खेलाडीले रातो कार्ड पाएको फ्रेन्च लिगको खेलमा साविक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) मार्सेसँग पराजित भएको छ। पिएसजीलाई मार्सेले उसैको मैदानमा १&ndash;० ले पराजित गरेको हो । फ्लोरिन थाउभिनले दोस्रो हाफमा गरेको गोल गर्नै मार्सेलाई ३ अंक दिलाउन निर्णायक बन्यो । कोरोना संक्रमणबाट निको भएर मैदान...
दुर्घटनामा परेर गम्भिर घाइते भएका क्रिकेटर भण्डारी ‘खतरामुक्त’
काठमाडौं &ndash; आइतबार दुर्घटनामा परेर गम्भिर घाइते भएका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटर ललित भण्डारी खतरामुक्त भएका छन् । धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको से १ ख १३२४ नम्बरको ट्रकले भण्डारी सवार म २ प ४७०५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा क्रिकेटर भण्डारीसहित उनको नातेदार करन ठगुन्ना पनि घाइते भएका थिए । दुर्घटनापछि गम्भीर घाइते भएका...
सालाहको ह्याट्रिकसँगै लिभरपुलको जित
काठमाडौं - साविक विजेता लिभरपुलले नयाँ सिजनको प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमै जित हात पार्न संघर्ष गर्नुपर्&zwj;यो । शनिवार भएको रोमाञ्चक खेलमा मोहम्मद सालाहको ह्याट्रिक मद्दतमा लिभरपुलले नवप्रवेशी लिड्स युनाइटेडलाई ४&ndash;३ ले पराजित गरेको हो । लिभरपुलको घरेलु मैदान एनफिलडमा भएको खेलको पहिलो हाफमै गोलको वर्षा भएको थियो । पहिलो हाफमा पाँच...
युएस ओपन टेनिसको उपाधि ओसाकाको पोल्टामा
काठमाडौं&nbsp; - जापानी खेलाडी नाओमी ओसाकाले दोस्रो पटक युएस ओपन ग्राण्डसलाम टेनिसको उपाधि जितेकी छन् । न्यूयोर्कमा भएको महिलातर्फको फाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई २-१ सेटमा पराजित गर्दै ओसाकाले दोस्रो पटक उपाधि जितेकी हुन् । पहिलो सेट ६-१ ले गुमाएपनि ओसाकाले त्यसपछि पुनरागमन गर्दै लगातार दुई सेट जितिन् । उनले ६-३ ,...
सेन्ट लुसिया जुक्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै ट्रिनबागोले उचाल्यो सीपीएलको उपाधि
काठमाडौं - ट्रिनबागो नाइट राइडर्सले अपराजित रहँदै क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी-२० क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । बिहीबार ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा भएको फाइनलमा ट्रिनबागोले सेन्ट लुसिया जुक्सलाई ८ विकेटले सहजै पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो । ट्रिनबागोले लिग चरणदेखि फाइनलसम्म खेलेको १२ वटै खेल जित्दै अपराजित रहेर प्रतियोगता सकाएको हो ।...
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल : रोनाल्डोले गरे १०० गोल पूरा
काठमाडौं - पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा १०० गोल पूरा गरेका छन् । उनी आफ्नो देशका लागि १०० गोल गर्ने पहिलो युरोपेली खेलाडी भएका छन् । रोनाल्डोकै दुई गोल मद्दतमा पोर्चुगलले युइएफए नेशन्स कप अन्तर्गत लिग ए को समूह ३ को खेलमा स्वीडेनलाई २-० ले पराजित गरेको हो । ३५...
पारस खड्का एमबिए अध्ययन गर्दै,फिनिक्स कलेजको एमबिए कार्यक्रमका लागि ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त
काठमाडौं - नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्काले सेप्टेम्बरदेखि एमबिए अध्ययन गर्ने भएका छन्। उनले थापागाँउको फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट सेप्टेम्बर सत्रदेखि एमबिए अध्ययन गर्न लागेका हुन्। यसअघि खड्काले व्यवस्थापनमै स्नातक गरेका थिए। यहि सत्रदेखि एमबिए अध्ययन गर्न लागेका खड्कालाई कलेजको एमबिए कार्यक्रमका लागि ब्रान्ड एम्बासडर पनि नियुक्त गरिएको छ। शनिबार कलेजका डाइरेक्टर...
अष्ट्रेलियालाई ६ विकेटले पराजित गर्दै एक खेलअघि नै इंग्ल्याण्डले जित्यो टी-२० सिरिज
काठमाडौं - इंग्ल्याण्डले अन्तिम खेलअघि नै अष्ट्रेलियाविरुद्धको तीन खेलको टी-२० सिरिज जितेको छ । आइतबार राति भएको दोस्रो खेलमा अष्ट्रेलियालाई ६ विकेटले पराजित गरेपछि इंग्ल्यान्डले एक खेल अगाबै सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको हो । पहिलो खेलमा २ रनको जित हात पारेको इंग्ल्याण्डले २-० को अग्रता लिएको छ । साउथह्याम्पटनको रोज बलमा भएको...
सन्दीप लामिछाने आवद्ध जमैका तलावाज सिपीएलको सेमीफाइनलमा
काठमाडौं &ndash; सन्दीप लामिछाने आवद्ध जमैका तलावाज क्यारेवियन क्रिकेट लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। शुक्रबार बिहान भएको खेलमा बारबाडोस ट्रीडेन्टस गुयाना अमेजन वारियर्ससँग पराजित भएपछि जमैका लिग चरणमा दुई खेल खेल्न बाँकी रहँदै लिगको सेमिफाइलनमा पुग्ने निश्चित भएको हो । आठ खेलबाट सात अंक भएको जमैका तालिकाको चौथौ स्थानमा छ । पाँचौँ स्थानमा...
मेस्सीका पिताले बार्सिलोनाका अध्यक्षलाई भेटेर के भने ?
एजेन्सी- लियोनल मेस्सीका पिता तथा एजेन्ट खोर्खे मेस्सी बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्तोमेउसँग भेट गरेका छन्। लियोनल मेस्सीको भविष्यका बारेमा छलफल गर्न उनले बार्तोमेउसँग भेट गरेका हुन् । ३३ वर्षका मेस्सीले गएको हप्ता क्लबसँगको २० वर्षको सहकार्य अन्त्य गरी बाहिरिन चाहेको बताएका थिए। बुधबार मेस्सीका पिता र बार्सिलोनाका अध्यक्षबिच भएको वार्तामा...
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकका लागि आवेदन आह्वान,के-के छन् मापदण्ड?
काठमाडौं &ndash; नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। इंग्ल्याण्ड क्रिकेट बोर्ड अथवा अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डबाट कोचिङ लेबल(३ कोर्स गरेको हुनुपर्ने, आईसिसीको पूर्ण सदस्य, प्रथम श्रेणी टोली, आईसिसी एसोसिएट राष्ट्रिय टोली वा अन्तर्राष्ट्रिय लिगमा कम्तीमा तीन वर्ष प्रशिक्षक भएर काम गरेकाले आवदेश दिन...
नेयरमार,डी मारियासहित पीएसजीका तीन खेलाडीलाई कोरोना पुष्टि
एजेन्सी &ndash; पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)का एन्जल डी मारिया र लियोनार्दो परेडेसलाई कोरोना भाईरस संक्रमण भएको छ । नेयमारसहित तीन खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पीएसजीले जनाएको छ । &lsquo;परीक्षणपछि तीन जना पीएसजीका खेलाडीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । र तीनै जना स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार आइसोलेसनमा रहेका छन्,&rsquo; क्लबले भनेको...
मेसीलाई गृहभूमि फर्केर पुरानै क्लबमा करियर अन्त्य गर्न अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं - अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले लिओनल मेसीलाई आफ्नै गृहभूमिमा फर्केर नेवल्स ओल्ड ब्वाइजमा करियर अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । मेसीले आश्चर्यजनक रुपमा क्लब छाड्ने घोषणाले पछिल्लो साता धेरै हेडलाइन्स बने । ला लिगाले मेसीले क्लब छाड्न रिलिज क्लज लागु हुने जनाएपछि यसमा नयाँ ट्वीस्ट थपिएको छ । यदि अन्य...
लियोनलाई लगातार पाँचौँपटक महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि
एजेन्सी - फ्रेन्च क्लब लियोनले लगातार पाँचौँ सिजन महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ। स्पेनको सन सेबास्टियनमा आइतबार राति भएको फाइनलमा वुल्फ्सबर्गलाई ३&ndash;१ ले पराजित गरेर लियोनले उपाधि जितेको हो । लियोनका लागि पहिलो हाफमा युजिन ली सोमर र साकी कुमागाईले गोल गरेर क्लबलाई बलियो अवस्थामा लगे । दोस्रो हाफमा एलेक्सान्ड्रा पोप्पले...
सीपीएलमा जमैकाद्धारा प्याट्रिओट्सलाई ३७ रनले पराजित, सन्दीपले लिए २ विकेट
काठमाडौं - ग्लेन फिलिप्सको अर्धशतक र कार्लोल ब्रेथइटेको उत्कृष्ट बलिङ मद्दतमा जमैका तल्लावाहजले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा तेस्रो जित हात पारेको छ । नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछानेले २ विकेट लिएको उक्त खेलमा जमैकाले सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रिओट्सलाई ३७ रनले पराजित गरेको हो । ६ खेलमा ३ खेल जितेको जमैकाले ६...
मेसी बार्सिलोनामै रहे अध्यक्ष पद छाड्न जोसेफ तयार
काठमाडौं - स्पानिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्तामेउले कप्तान लिओनल मेसीले क्लब छाड्ने निर्णय बदलेमा आफूले क्लब छाड्ने बताएका छन् । मेसी क्लबमा रहने अवस्था आए बार्तामेउले आफू पद छाड्ने संकेत गरेको स्पानिस अनलाइन मार्काले जनाएको छ । अर्जेन्टिनी स्टार मेसीले मंगलबार क्लबलाई पत्र लेख्दै आफूले क्लब छाड्न चाहेको जानकारी...
मेस्सीले बार्सिलोना छोड्नका लागि बुझाए आग्रह पत्र
एजेन्सी - स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका लेजेण्ड फर्वार्ड लियोनल मेस्सीले क्लब छोड्ने मनसायसहित आग्रह पत्र बुझाएका छन्। ३३ वर्षका अर्जेन्टाइनी खेलाडी मेस्सीले फ्याक्स मार्फत क्लबलाई मंगलबार पत्र पठाएका हुन् । सो पत्रमा उनले आफ्नो सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाहरुमा काम गरी आफूलाई तत्कालै लागु हुने गरी क्लब छोड्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्...
बार्यनसँगको हारपछि थामिनै सकेनन् नेइमार अनि भक्कानिए
काठमाडौं - चोटबाट निको भएर फर्किएपछिका खेलमा नेइमारले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । गोलसँगै गोलका लागि गरेको सहयोगका कारण उनको चर्चा सकारात्मक रुपमा हुन थालेको थियो । विश्लेषकहरुले सामान्य भन्दा फरक र परिपक्क नेइमार मैदानमा देखिन थालेको बताइरहेका थिए । तर आइतबार रातिको महत्वपूर्ण खेलपछि नेइमारले आँसु थाम्न सकेनन् र फ्यानहरुले...
पिएसजीलाई पराजित गर्दै बायर्नले जित्यो छैटौं पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि
काठमाडौं - जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले छैटौं पटक यरोपियन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको छ । आइतबार राति भएको फाइनलमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)लाई १&ndash;० ले पराजित गर्दै बायर्नले ७ वर्षपछि च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेको हो ।पोर्चुगलको लिस्वनमा भएको खेलमा बायर्नलाई जित दिलाउन पीएसजीका पूर्वखेलाडी किंग्सले कोमनले एकमात्र...
फुटबलर विश्वास श्रेष्ठको घरमा आगलागी
काठमाडौं &ndash; शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल लिग क्लब हिमालयन शेर्पाका स्टाइकर विश्वास श्रेष्ठको घरमा आगो लागेको छ। श्रेष्ठको स्याङ्जा वालिङस्थित घरमा शनिबार राति आगो लागेको हो। &lsquo;बेलुका खाना बनाइसकेपछि ग्यास बन्द गर्ने बेलामा ग्यास लिक भएर आगो लागेछ,&rsquo; फुटबलर श्रेष्ठले भने, आमालाई हल्का चोट लागेको छ। घरमा धेरै क्षति भयो।&rsquo; आगलागी भएपछि...
एजेन्सी &ndash; नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रर्दशनका बाबजुद क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी&ndash;ट्वान्टी क्रिकेटमा जमैकाले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ । शनिबार राति गुएना अमेजन वारियर्सबिरुद्धको खेलमा सन्दीप सम्मिलित जमैका १४ रनले पराजित बनेको हो । १ सय १९ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको जमैकाले ७ विकेटको क्षतीमा १ सय ४...
इन्टरको आत्मघाती गोलले सेभिल्लालाई दिलायो छैटौँ पटक युरोपा लिगको उपाधि
एजेन्सी - स्पेनिस क्लब सेभिल्लाले कीर्तिमानी छैटौँ पटक युरोपा लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ । शुक्रबार राति भएको फाइनलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानलार्य ३&ndash;२ ले पराजित गरेर सेभिल्लाले उपाधि जितेको हो । सेभिल्लाका लागि लूक डी जोङ्गले दुई गोल गरे भने इन्टर मिलानका रामेलु लुकाकुले एक आत्मघाती गोल गरे। इन्टर मिलानका...
जमैकाको विजयी सुरुवात,पहिलो खेलमै सन्दीपले लिए एक विकेट
काठमाडौं - नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सम्मलित जमैका तल्लावाहजले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी&ndash;२० क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ । जमैकाले सेन्ट लुसिया जुक्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै २ अंक जोडेको छ । ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा जारी प्रतियोगितामा जमैकाले १५९ रनको लक्ष्य ७ बल बाँकी छँदै ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो...
लेइप्जिगलाई ३–० ले पराजित गर्दै पिएसजी च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा
एजेन्सी &ndash; फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट&ndash;जर्मेन (पिएसजी) च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लिस्बोनमा मंगलबार राति भएको सेमिफाइनलमा जर्मन क्लब आरबी लेइप्जिगलाई ३&ndash;० ले पराजित गरी पिएसजीले फाइनल यात्रा तय गरेको हो । पहिलो हाफमा दुई गोल गरेको पिएसजीले दोस्रो हाफमा थप एक गोल गरेको हो । पिएसजीका लागि १३...
बार्सिलोनाको नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड बन्ने पक्का, मेस्सीले बार्सिलोना छोड्न लागेकै हुन त ?
काठमाडौं &ndash; रोनाल्ड कोएम्यान बार्सिलोनाको नयाँ प्रशिक्षक बन्ने पक्का भएको छ । बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्तोमेउले कोएम्यान नै क्लबको नयाँ प्रशिक्षक बन्ने बताएका छन् । ५७ वर्षका कोएम्यान बार्सिलोनाका पूर्व खेलाडी पनि हुन् । उनले हाफ नेदरल्याण्डसको राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक छन् । यो हप्ता भित्र उनलाई अनुबन्ध गर्ने प्रक्रिया पूरा हुने...
युरोपा लिगको फाइनलमा सेभिया र इन्टर भिड्ने
एजेन्सी &ndash; रोमेलु लुकाकु र लाउटारो मार्टिनेजको दुई&ndash;दुई गोलको मद्दतले इन्टर मिलानले शाख्तार डोनेस्कमाथि गोल वर्षा गर्दै युरोपा लिगको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ । सोमबार राति भएको खेलमा इन्टर ५&ndash;० गोलअन्तरले विजयी बनेको हो । अब फाइनलमा इन्टरले स्पेनिस क्लब सेभियाको सामना गर्नेछ । सेभियाले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै फाइनलमा...
युरोपा लिग : डोनेस्कमाथि मिलानको ५ गोलको वर्षा
बायर्नसँग ८–२ को लज्जास्पद हारपछि बार्सिलोनाद्वारा प्रशिक्षक सेटिएनलाई बर्खास्तको तयारी
काठमाडौं &ndash; स्पानियस जायन्ट बार्सिलोनाले प्रशिक्षक के सेटिएनलाई बर्खास्त गरेको छ । जनवरीमा एर्नेस्टो भेलभेर्डेलाई बर्खास्त गर्दै सेटिएनलाई प्रशिक्षक बनाइएको थियो । तर उनले स्पानि ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग दुवै जिताउन सकेनन् । च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग ८&ndash;२ को लज्जास्पद हारपछि ६१ वर्षीय सेटिएनको जागिर धरापमा परेको...
म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई पारजित गर्दै सेभिल्ला युरोपा लिगको फाइलनलमा
एजेन्सी &ndash; स्पेनिस क्लब सेभिल्ला यूईएफए युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार लिस्बनमा भएको सेमिफाइनल खेलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई २&ndash;१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेभिल्ला उपाधि नजिक पुगेको हो । खेलको नवौं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेसको पेनाल्टी गोलमा अग्रता लिएको म्यानचेस्टर युनाइटेड अग्रता जोगाउन नसक्दा अन्तिम चारबाटै बाहिरिएको हो । २६औं...
क्रिकेटर धोनीलाई राजनीतिमा आउन भाजपाका सांसदको प्रस्ताव
काठमाडौं &ndash; भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास लिएपछि विभिन्&zwj;न टीका टिप्पणी एवं प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन्। अधिकांशले धोनी भारतीय क्रिकेट टिमका महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्&zwj;दै हृदयबाट धन्यवाद दिएका छन् भने कतिपयले अब धोनी खेल होइन राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लाग्&zwj;ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। धोनीलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)...
धोनीले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास,एक युगको अन्त्य
काठमाडौं&nbsp; भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास लिएका छन्। ३९ वर्षीय धोनीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आफूले संन्यास लिने निर्णय गरेको बताएका हुन्। यसअघि टेस्ट क्रिकेटबाट संन्यास लिइसकेका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान धोनीले अब एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी&ndash;२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि खेल्नेछैनन्। धोनीले आइपिएल भने खेल्नेछन्। चेन्नइ सुपरकिंग्सका कप्तान धोनी पछिल्लो समय...
काठमाडौं । जर्मन बुण्डेस लिगा क्लब बायर्न म्युनिखले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई ८&ndash;२ ले पराजित गरेको छ । यो लज्जास्पद हारसँगै बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । लिस्बोनमा शुक्रबार राति भएको अन्तिम ८ को खेलमा बार्सिलोना र बार्यन म्युखिन भिडेका थिए । मेसीको कप्तानीमा रहेको बार्सिलोनाविरुद्ध बार्यनले चौथो मिनेटमै अग्रता...
धोनीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ,आइपीएल खेल्न बाटो खुला
काठमाडौं &ndash; चेन्नई सुपर किंग्सका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उनको बुधबार नमुना परीक्षण गरिएको थियो। राँचीको गुरु नानक अस्पतालस्थित माइक्रो प्रैक्सिस प्रयोगशालाका प्राविधिक टोलीले धोनीको फार्म हाउस गएर उनको नमुना संकलन गरेको थियो। यो सँगै अब धोनीको आइपीएल खेल्न बाटो खुला भएको छ। उनी सम्भवतः १४...
बार्सिलोनाका खेलाडीमा कोरोना पुष्टि,खेलाडीको नाम गोप्य
एजेन्सी &ndash; स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका एक खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । तर बार्सिलोनाले ती खेलाडीको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । प्रि&ndash;सिजन प्रशिक्षणका लागि रिपोर्टिङ्ग गरेका मध्ये एक खेलाडीमा संक्रमण देखिएको र उनी हाल घरमै क्वारेन्टिनमा रहेको जनाइएको छ । संक्रमित खेलाडीको सम्पर्क च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलका लागि लिस्बोन गएका खेलाडीहरुसँग...
विश्वकप छनोटका खेलहरु फेरि स्थगित
काठमाडौं । कतारमा सन् २०२२ मा हुने फिफा विश्वकप र चीनमा २०२३ मा हुने एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत बाँकी रहेका खेलहरु फेरि स्थगित भएका छन् । कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा यसअघि स्थगित भएर अक्टोबर&ndash;नोभेम्बरमा गर्ने तयारी भएको छनोटका बाँकी खेलहरु पुनः स्थगित भएका हुन् । एएफसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी...
युरोपा लिगको सेमिफाइनलमा सेभिया र साख्तर
काठमाडौं । स्पानिस क्लब सेभिया र युक्रेनी क्लब साख्तर डोनेस्क युरोपा लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । गएराति भएको क्वाटरफाइनलमा सेभियाले इंग्लिस क्लब वल्भ्सलाई र साख्तरले स्वीस क्लब बासेललाई पराजित गरेका हुन् । खेलको अन्त्यतिर लुकास ओकमपासले गरेको एक गोलको मद्दतमा सेभियाले वल्भसलाई १(० ले पराजित गरेको हो । त्यसअघि १३औं...
राष्ट्रिय फुटबल टिमको २३ खेलाडीसहित २९ जनाको कोरोना परीक्षण
काठमाडौं । राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने थप २३ खेलाडीको मंगलबार कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि नमुना स्वाब स&zwnj;ंकलन गरिएको थियो । विश्वकप छनोटका लागि प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारीमा रहेकाका खेलाडीहरुले पाटन अस्पतालमा मंगलबार स्वाब दिएका हुन् । मंगलबार २३ खेलाडी, टिम म्यानेजर मधुसुदन उपाध्याय, गोलकिपिङ प्रशिक्षक विकास मल्लसहित २९...
७ वर्षपछि चेल्सीबाट बिदा हुँदै वेङ्गर विलियन
एजेन्सी &ndash; ब्राजिलियन वेङ्गर विलियनले इंग्लिस क्लब चेल्सी छोड्ने पुष्टि गरेका छन् । सात वर्षको चेल्सी बसाईपछि अब नयाँ मार्ग रोज्ने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारेका हुन् । ३२ वर्षका विलियन चोटका कारण शनिबार राति भएको च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्यन म्युनिखसँगको खेलमा मैदानमा थिएनन् । सो खेलमा चेल्सी पराजित भयो ।...
आन्द्रेया पिर्लोले पाए युभेन्टसमा प्रशिक्षकको जिम्मा
एजेन्सी &ndash; इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसले आन्द्रेया पिर्लोलाई क्लबको नयाँ प्रशिक्षकका रुपमा नियुक्त गरेको छ । उनले बर्खास्त भएका माउरिजिओ सारीको स्थान लिने छन् । युभेन्टसले पूर्व मिडफिल्डर आन्द्रेयालाई २३ वर्षमुनिको टिमको प्रशिक्षकका रुपमा नियुक्त गरेको हप्ता दिनभित्रै सिनियर टिमको जिम्मा दिएको हो । युभेन्टसका पूर्व मिडफिल्डर आन्द्रेयाले क्लबका लागि खेलाडीका रुपमा चार...
काठमाडौं&ndash; आगामी वर्ष हुने तय भएको विश्वकप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। यसै वर्षको फेब्रुअरी ६ देखि मार्च ७ सम्म न्यूजिल्याण्डमा ५० ओभरको महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने तय भएको थियो। कोरोनाभाइरसका कारण यस वर्ष हुने भनिएका तीनवटा महिला क्रिकेट...
लियोन क्वाटरफाइनलमा, रोनाल्डोको दुई गोल
काठमाडौं । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई गोल गर्दै युभेन्ट्सलाई जित दिलाउँदा पनि इटालियन क्लब युभेन्टस युरोपियन च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएको छ । अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा युभेन्ट्सले फ्रेन्च कलब लियोनलाई २&ndash;१ ले पराजित गर्दै समग्रमा नतिजा २&ndash;२ को बराबरी गरेको थियो । तर अवे मैदानमा गोल गरेको आधारमा लियोन भाग्यमानी बन्यो । लियोनले...
काठमाडौं &ndash; म्यानचेस्टर युनाइटेड र इन्टर मिलान युरोपा लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा अस्ट्रियन क्लब एलएएसकेलाई २&ndash;१ ले हराउँदै समग्रमा ७&ndash;१ को जितसहित युनाइटेड अन्तिम ८ मा पुगेको हो । पहिले लेगमा युनाइटेड ५&ndash;० ले विजयी भएको थियो । बुधबार राति भएको दोस्रो लेगमा पछि...
बार्सिलोना फर्किने नेइमारको सपना यो वर्ष पनि अधुरै !
एजेन्सी &ndash; बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्तोमेउले नेइमारलाई यो सिजन पनि अनबन्धित नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित भएको अहिलेको आर्थिक अवस्थामा नेइमारलाई पुनः क्लब भित्र्याउनु वा अनुबन्धित गर्नु &lsquo;अव्यवहारिक&rsquo; हुने अध्यक्ष बार्तोमेउले बताएका हुन् । आर्थिक अवस्थाका कारण इन्टर मिलानका स्ट्राइकर लाउतारो मार्तिनेजको अनुबन्ध पनि प्रभावित...
आईपीएल १९ सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने
काठमाडौं &ndash; इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी&ndash;२० को १३ औं संस्करण सेप्टेम्बर १९ देखि सुरु हुने भएको छ । आइतबार बसेको आईपीएल गभर्निङ काउन्सिलको बैठकले भारतीय सरकारबाट प्रतियोगिता आयोजना गर्न ग्रिन सिग्नल पाएको र सेप्टेम्बर १९ देखि युएईमा आईपीएल हुने तय भएको इन्डिया टिभीले जनाएको छ । फाइनल खेल नोभेम्बर १० मा...
केही नियम बनाइएर प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानको तयारी
झण्डै चार महिनासुनसान रहेको कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा अहिले चहलपह देखिन्छ । सरकारले भदौ एक गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि प्रशिक्षण गर्न अनुमति दिएपछि क्यान तयारीमा जुटेको हो । क्यानको योजना अनुसार बढीमा २४ जना खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाइनेछ र उनीहरुलाई कीर्तिपुर मैदान भित्रै क्वारेन्टिनमा राखिनेछ । क्यानले खेलाडी, पदाधिकारी र सहयोगी कर्मचारी गरी कुल...
चेल्सीलाई हराउँदै १४ औँ पटक एफए कपको उपाधि आर्सनललाई
काठमाडौं &ndash;&lsquo;हेड्स अप एफए कप&rsquo; फुटबलको उपाधि आर्सनलले जितेको छ । शनिबार राति भएको फाइनलमा चेल्सीलाई २&ndash;१ ले पराजित गरी आर्सनलले कीर्तिमानी १४ औँ पटक एफए कपको उपाधि जितेको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा आर्सनलका लागि दुवै गोल पिएर एमरिकले गरेका हुन् । उनले २८ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टी र ६७...
पीएसजी फ्रेन्च लिग कपको च्याम्पीयन
काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले फ्रेन्च लिग कपको उपाधि जितेको छ । गएराति भएको फाइनल खेलमा लियोनलाई पराजत गर्दै पीएसजीले उपाधि कब्जा गरेको हो । निर्धारित समय र थप गरिएको समयमा दुवै पक्षबाट गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टीबाट निर्णय लिइएको थियो । जसमा पीएसजीले ६ गोल गरेको थियो भने...
प्रशिक्षणका लागि बाकी १४ खेलाडीहरु आजै काठमाडौं आइपुग्ने
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल छनोट अन्तर्गत हुने खेलको लागि प्रशिक्षण सुरु गर्न उपत्यका बाहिर रहेका फुटबल खेलाडीहरु काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । फिफा विश्वकप २०२२ तथा एएफसी एसिया कप २०२३ को संयुक्त छनोटअन्तर्गत नेपालले अक्टोबर नोभेम्बरमा घरेलु मैदानमा ३ खेल खेल्दैछ । त्यसैका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भदौ १...
काठमाडौं - विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीको कहर थियो । यस्तोमा विश्व खेलकूदमा प्रत्यक्ष असर पर्&zwj;यो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी लागू गर्यो। यसको प्रत्यक्ष मारमा चर्चित क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने पनि परे। उनी यसबीचमा चार महिना बन्दाबन्दीमा घरमै बसे। &ldquo;समय व्यतित गर्न निकै गाह्रो भयो&rdquo;, कीर्तिपुरस्थित...
साम्पडोरियामाथी एसी मिलानको शानदार जीत
एजेन्सी &ndash; इटालियन सिरी &lsquo;ए&rsquo; फुटबलमा सहज जीत निकालेको छ । बुधबार राति साम्पडोरियाको घरेलु मैदानमा मिलानले ४&ndash;१ को सहज जीत निकालेको हो । मिलानको जितमा ज्लाटन इभ्राहिमोभिचले दुई गोल गर्दा हकान कलहानोग्लु र राफयल लियोले गोल गरे । घरेलु टोलीका क्रिस्टोफोर एस्किल्दसेनले एक गोल फर्काए । साम्पडोरियाको मैदानमा मिलानले खेलको चौथो मिनेटमा...
कीर्तिपुर मैदानका कर्मचारीलाई सन्दिपको आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ &ndash;नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानका कर्मचारीहरुलाई एक लाख सहयोग प्रदान गरेका छन् । मैदानको रेखदेख तथा मर्मतमा काम गरिरहने कर्मचारीहरुलाई सन्दिपले सहयोग स्वरुप सो रकम दिएका हुन् । क्यारेवियन प्रमियर लिग खेल्नका लागि जमाइका जाँदै गरेका सन्दिपले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसको घोषणा गरेका हुन् । कीर्तिपुर...
काठमाडौं&nbsp; - स्पेनिस ला लिगा क्लब रियल मड्रिडका स्ट्राइकर मारियानोलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । रियल मड्रिडले मंगलबार वक्तव्य जारी गरेर मारियानोमा संक्रमण देखिएको बताएको हो । २६ वर्षका उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको रियल मड्रिडले उल्लेख गरेको छ । उनी घरमै आइसोलेशनमा रहेको पनि रियल मड्रिडले जानकारी दिएको छ...
सीपिएल खेल्न सन्दिप भोली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै
काठमाडौं - क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपिएल) क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको सहभागिता निश्चित भएको छ। उनका म्यानेजर रमन सिवाकोटीका अनुसार सन्दीप बिहीबार क्यारेबियन क्रिकेट खेल्न प्रस्थान गर्दैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनिश्चितताका कारण सन्दीपको सीपिएल क्रिकेटमा सहभागिता अनिश्चितजस्तै बनेको थियो। प्रतियोगिता सुरु हनुभन्दा केही साताअघि नै त्यहाँ पुगिसक्नु प्रावधान छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले। कोरियन एयरलाइन्सको चार्टर्ड...
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको मनोनयन रोक्न माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले विभाग तथा समितिहरुमा मनोनयन रोक्न माग गरेका छन् । काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयमा बाहेक विभाग वा समिति गठन गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक नैतिकता विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । &lsquo;यस्ता लोक...
सन्दिपले गरे पीसीआर परिक्षण
काठमाडौँ&ndash; क्यारेवियन प्रिमियर लिग खेल्नका लागि जाने तयारीमा रहेका सन्दिप लामिछानेले पीसीआर परिक्षण गरेका छन । शुक्रबारसम्म सीपीएल खेल्नका लागि उड्ने तयारीमा रहेका सन्दिपले आज काठमाडौंको एक अस्पतालमा आफ्नो पीसीआर परिक्षण गरेका हुन । सन्दिप सीपीएलका लागि विहिबार वा शुक्रबार जाने संभावना रहेको छ, जसको टुंगो लाग्नका लागि सीपीएल आयोजक तथा बार्बाडोस...
काठमाडौँ &ndash; सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेशकुमार सिलवाल नियुक्त भएका छन्। तत्कालीन एमाले निकट मदन भण्डारी स्पफोस्र्ट एकेडेमीका संस्थापन अध्यक्षसमेत रहेका सिलवाललाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेप सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो। खेलकुद मन्त्रालयले सिलवालसहित महिला राष्ट्रिय भेलिबल टिमकी पूर्व कम्तान अञ्जु श्रेष्ठ र नेपाल भविल संघका पूर्व उपाध्यक्ष तथा...
चोटका कारण एम्बाप्पेले च्याम्पियन्स लिग खेल्न नसक्ने
काठमाडौं &ndash; फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का फरवार्ड केलियन एम्बाप्पेले च्याम्पियन्स लिगका खेल खेल्न नसक्ने भएका छन् । खुट्टाको चोट कारण एम्बाप्पेले आगामी अगष्ट १२ मा च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गतको क्वाटरफाइनल खेल गुमाउने भएका हुन् । पीएसजीको च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइलनमा अगष्ट १२ मा एटलान्टासँग खेल हुदैछ । २१ वर्षीय एम्बाप्पेले फ्रेन्च...
काठमाडौं । युभेन्ट्सले लगातार नवौं पटक इटालियन सिरी एको उपाधि जितेको छ । जारी सिजनअन्तर्गत गएराराति भएको खेलमा साम्पडोरियालाई २&ndash;० ले पराजित गर्दै युभेन्टसले दुई खेल अगावै उपाधि पक्का गरेको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टसका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डो र फेडेरिको बर्नार्डसीले एक&ndash;एक गोल गरे । पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा...
इटालियन सिरी एको उपाधि नवौं पटक पनि युभेन्ट्सकै पोल्टामा
काठमाडौं&nbsp; - युभेन्ट्सले लगातार नवौं पटक इटालियन सिरी एको उपाधि जितेको छ । जारी सिजनअन्तर्गत गएराराति भएको खेलमा साम्पडोरियालाई २&ndash;० ले पराजित गर्दै युभेन्टसले दुई खेल अगावै उपाधि पक्का गरेको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टसका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डो र फेडेरिको बर्नार्डसीले एक&divide;एक गोल गरे । पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा...
नयाँ नियमका कारण सिटी र रियालकाे खेल अन्याेलमा
कोरोना भाइरसका लागि बेलायत सरकारले नयाँ नियम लागु गरेपछि च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम १६ को दोस्रो लेगको म्यानचेस्टर सिटी र रियाल मड्रिडको खेल खतरामा परेको छ । स्पेनबाट आउने पर्यटकहरुले बेलायतमा अनिवार्य १४ दिनको सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नयाँ नियम बेलायत सरकारले बनाएको छ । शनिबारबाट लागु गरिएको यो नयाँ नियमका कारण रियाल...
सस्सुलोको चार गोलले मान्यता नपाउँदा नापोलीको नाटकीय जीत
एजेन्सी &ndash; सस्सुलोले लगाएको चार गोलले मान्यता नपाउँदा इटालियन सिरी &lsquo;ए&rsquo; मा नापोलीले जीत हार पारेको छ । नापोलीमा शनिबार राति भएको खेलमा घरेलु टोलीको जीतमा इलसिड ह्यासाज र एलानले गोल गरे । खेलको आठौं मिनेटम नै लेफ्टब्याक इलसिडले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई १&ndash;० को अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि सस्सुलोले चार...
‘आईपीएल १९ सेप्टेम्बरबाट’
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १३औं संस्करण सेप्टेम्बर १९ देखि युएईमा हुने भएको छ । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)को विश्वस्त स्रोतले १९ सेप्टेम्बरदेखि लिग सुरु हुने र फाइनल नोभेम्बर ८ मा हुने बताएको समाचार एजेन्सी पीटीआईले उल्लेख गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीको कारण अनिश्चित बनेको आईपीएल टी&ndash;२०...
फुटबल प्रशिक्षण तयारी : खेलाडीहरु पीसीआर टेष्टपछि मैदानमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीले रोकिएको राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण भदौ १ देखि फेरि सुरु गर्ने तयारी अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गरेको छ । कोरोना महामारीको संक्रमण रोक्न सरकारले २०७६ चैत ११ देखि लकडाउन लागु गरेपछि फुटबल टिमको प्रशिक्षण रोकिएको थियो । सरकारले चार महिनापछि बुधबार लकडाउन खुल्ला गरेपछि अब...
चेल्सीमाथी लिभरपुलको शानदार जीत
काठमाडौं&ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लन्डन क्लब चेल्सीलाई पराजित गरेको छ । घरेलु मैदानमा लिभरपुलले चेल्सीमाथि शानदार जीत निकालेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले चेल्सीलाई ५&ndash;३ गोल अन्तरले हराएको छ । एनफिल्डमा लिभरपुलसँगको हारसँगै चेल्सीको शीर्ष चारको यात्रा कठिन बनेको छ । अब चेल्सीले शीर्ष चारमा स्थान बनाउनको...
पकप्तानको जिम्मेवारी मोइल अलीलाई
काठमाडौं । आयरल्याण्डविरुद्ध हुने ओडिआई क्रिकेट सिरिजमा लागि मोइन अली इंग्ल्याण्डको उपकप्तान चयन भएका छन् । अहिले भइरहेको वेष्ट इन्डिजविरुद्धको टेष्ट टोलीमा पर्न असफल रहेका अलराउण्डर अलीलाई इसीबीले आयरल्याण्डविरुद्धको तीन खेलको सिरिजका लागि उपकप्तान चयन गरेको हो । घरेलु भूमिमा हुने सिरिजको इंग्लिस टोलीको कप्तानी आयन मोर्गनले गर्नेछन् । सिरिज साउथह्याम्पटनको एजेस बाउलमा...
राखेप निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का निवर्तमान सदस्य सचिव तथा अहिले सदस्य सचिवका मुख्य दाबेदारका रुपमा रहेका रमेशकुमार सिलवालविरुद्ध उजुरी परेको छ । उनीविरुद्ध युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो । नेपाल उशु संघका उपाध्यक्ष तथा खेलकुद महासंघका उपाध्यक्ष रहेका जनक बढ्तौलाले सिलवालले काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा भएको १३ औं...
टोकियो ओलम्पिकको खेल जुलाई २१ देखि सुरु हुने
काठमाडौँ &ndash; सन् २०२१ मा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । आयोजक टोकियो ओलम्पिकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन जुलाई २३ मा हुनेछ । यदयपि खेलका प्रतिस्पर्धा भने जुलाई २१ देखि नै सुरु हुनेछन् । कोरोना भाइरसको महामारीले एक वर्ष सरेको ओलम्पिकमा विभिन्न ३३ खेलमा...
बेन्जिमाको २ गोलसँगै ला लिगा उपाधि रियल मड्रिडको पोल्टामा,बार्सिलोना घरेलु मैदानमै पराजित
काठमाडौं - रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि जितेको छ। लिग अन्तर्गत बिहीबार राति भएको खेलमा भिल्लारियललाई पराजित गरी जिनेदिन जिदानको टिम रियल मड्रिडले एक खेल बाँकी हुँदै उपाधि पक्का गरेको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा रियल मड्रिडले भिल्लारियललाई २-१ ले पराजित गरेको हो । रियलको जितमा दुवै गोल करिम...
मेस्सीको गोलले पनि टारेन बार्सिलोनाको हार,ओसासुनासँग २-१ ले पराजित
काठमाडौं &ndash; स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा दोस्रो स्थानको बार्सिलोना घरेलु मैदानमा पराजित भएको छ । बिहीबार राति भएको खेलमा बार्सिलोना ओसासुनासँग २-१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । घरेलु मैदानमै बार्सिलोना १० खेलाडीमा समेटिएको ओसासुनासँग पराजित भएको हो । खेलको १५औं मिनेटमा जोसे अर्न्नेजले गोल गर्दै ओसासुनालाई अग्रता दिलाए । ६२ औं मिनेटमा...
युभेन्टस सासुओलोसँग ३–३ को बराबरीमा रोकियो
काठमाडौं - जित निकाल्न नसके पनि बराबरीबाट युभेन्टसले दोस्रोको एट्लान्टा र तेस्रोको लाजिओसँग अंक दूरी बढाउन भने सफल भएको छ । इटालियन सिरी ए फुटबल अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा उपाधि होडमा रहेको युभेन्टस सासुओलोसँग ३&ndash;३ को बराबरीमा रोकियो । अवे मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टसका लागि पाँचौँ मिनेटमा डानिलो, १२ औँ मिनेटमा...
न्यूक्यासललाई ३-१ ले हराउँदै टोटनह्यामको प्रभावशाली जित
एजेन्सी - इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा जोसे मोरिन्होको टिम टोटनह्याम विजयी भएको छ। अवे मैदानमा भएको खेलमा टोटनह्यामले न्यूक्यासल युनाइटेडलाई ३&ndash;१ ले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफमा एक गोल गरेको टोटनह्यामले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरी एक गोल खाएको हो। २७ औँ मिनेटमा सन हेङ्ग&ndash;मिनको गोलबाट टोटनह्यामले सुरुवाति...
ओलम्पियन विष्ट, वैद्य र सिंहले दिए राजीनामा
काठमाडौं &ndash; ओलम्पियनद्वय दीपक विष्ट र संगीना वैद्य तथा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । दीपकले नेपाल तेक्वान्दो संघको सचिव र प्रवक्ता तथा संगीनाले तेक्वान्दो संघकै सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको विष्टले जनाएका छन् । दुवै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा तेक्वान्दो प्रशिक्षकका रुपमा कार्यरत छन् । राखेपअन्तर्गत...
राखेपको सदस्यसचिवका लागी फेरि सिलवालले पनि दिए उम्मेदवारी
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिवका लागि निवर्तमान सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवालले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले बुधबार सदस्य सचिवका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । सिलवालसँगै सदस्यसचिवका लागि अन्य ११ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ११ मध्ये सिलवालले १० औं नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०७६...
रियल मड्रिडद्धारा ग्रानडा २-१ ले पराजित,उपाधि नजिक रियल
काठमाडौं - स्पानिस ला लिगा अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा लिग लिडर रियल मड्रिडले ग्रानडालाई २-१ ले पराजित गरेको छ । जितपछि रियलले दोस्रो स्थानको बार्सिलोनामाथि ४ अंकको अग्रता बनाएको छ । अब रियललाई उपाधि जित्न २ अंक मात्र आवश्यक छ । ग्रानाडाको मैदानमा भएको खेलमा फोर्लान मेन्डीले १०औं मिनेटमा गोल गर्दै...
सेफिल्डसँग चेल्सीको लजास्पद हार
काठमाडौं &ndash; इङ्ग्लीस प्रिमियर लिगमा चेल्सी सेफिल्ड युनायटेडसँग पराजित भएको छ । शनिबार राति सेफिल्डको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पाहुना टोली चेल्सी ३&ndash;० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । चेल्सीविरुद्ध आक्रामक देखिएको सेफिल्डका लागि डेभिड म्याकगोल्ड्रिकले दुई र ओली म्याकबुर्नेले एक गाल गरेका हुन् । सेफिल्डले खेलको १८ औं मिनेटमा म्याकगोल्ड्रिकको गोलमा अग्रता...
रोनाल्डोको २ पेनाल्टी गोलले जोगायो युभेन्ट्सको हार
काठमाडौं &ndash; क्रिष्टीयानो रोनाल्डोले दुई पेनाल्टी गोल गर्दा इटालियन सिरी ए को शीर्ष स्थानमा रहेको युभेन्ट्स हारबाट जोगिएको छ । आइतबार बिहान भएको खेलमा युभेन्ट्सले एट्लान्टालाई २&ndash;२ गोल बराबरीमा रोक्दै अंक बाडेको हो । युभेन्ट्सको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा एट्लान्टाका डुभान जपाटाले १६ औं मिनेटमा गोल गदै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए...
ला लिगा:बिल्वाओ विरुद्ध सेभिल्लाको २–१ को जीत
काठमाडौं &ndash; स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा सेभिल्लाले पूनरागमन जीत निकालेको छ । सेभिल्लाले एथ्लेटिक क्लब बिल्वाओमाथि उसकै मैदानमा २&ndash;१ को पूनरागमन जीत हात पारेको हो । विहीबार राति भएको खेलमा सेभिल्लाको जितमा इभर बनेगा र मुनिर इएल हाडडाडीले गोल गरे । एथ्लेटिकका एन्डर कापाले गरेको गोल सान्त्वना बन्यो । खेलको २८औं मिनेटमा कापाको...
एस्टन भिल्लामाथि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको ३–० को सहज जीत
काठमाडौं &ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एस्टन भिल्लामाथि सहज जित हात पारेको छ । युनाइटेडले घरेलु टोली एस्टन भिल्लामाथि ३&ndash;० को सहज जीत हात पारेको हो । भिल्ला पार्क बर्मिङघममा विहीबार राति भएको खेलमा युनाइटेडको सहज जितमा ब्रुनो फर्नान्डेज, मासन ग्रीनवुड र पउल पोग्वाले गोल गरे । जीतसँगै युनाइटेडले शीर्ष चारको...
न्युकासलमाथी म्यान्चेष्टर सिटीको ५-० को फराकिलो जीत
काठमाडौं &ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले शानदार जीत हात पारेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा सिटीले न्युकासल युनाइटेडलाई ५-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदानमा सिटीलाई जीत दिलाउन गाब्रियल जिसस, रियाद महरेज, रहिम स्ट्रर्लिङ र डेभिड सिल्भाले एक एक गोल गरे । न्युकासलका फेड्रिको फर्नान्डेजले एक आत्मघाती गोल...
प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लियो चेल्सी
काठमाडौं &ndash; चेल्सी इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसलाई ३&ndash;२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । क्रिस्टलको मैदानमा चेल्सीलाई जित दिलाउन ओलिभर जेरुड, क्रिस्टियन पुलिसिच र टामी अब्राहमले एक एक गोल गरे । क्रिस्टलका विल्फ्रेड जाहा र...
रोनाल्डको गोलले पनि जोगाउन सकेन यभेन्टसलाई, एसी मिलानसँग लज्जास्पद हार
काठमाडौं &ndash; क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोलका बाबजुद यभेन्टसले इटालियन सिरी ए मा एसी मिलानसँग लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा रहेको साविक विजेता युभेन्टस मंगलबारको खेलमा लज्जास्पद एसी मिलानको घरेलु मैदान सान सिरोमा ४(२ ले पराजित भयो । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा भने ६...
सिपिएलमा सन्दीप जमैका तलावाजबाट खेल्ने,पारिश्रमिक १ करोड
काठमाडौं - नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सिजनको क्यारेबियन प्रिमियर लिग(सिपिएल) टी२० क्रिकेट प्रतियोगिता जमैका तलावाजबाट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपलाई जमैकाले ड्राफ्टको दोस्रो राउन्डमा आफ्नो टिममा राखेका हो। सन्दीपले ड्राफ्टका लागि ९० हजार अमेरिकी डलर (१ करोड ७ लाख रुपैयाँ बढी) मूल्य राखेका थिए। गत असार १० गते गरिएको ड्राफ्ट सोमबार साँझ...
आईएसकेयू इन्टरनेशनल अनलाइन कराते कातामा नेपाल तेस्रो
काठमाडौं - आईएसकेयू इन्टरनेशनल अनलाइन कराते काता च्याम्पियनसिप २०२० मा नेपाल तेस्रो स्थानमै सीमित बनेको छ। समान ६ स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जितेको नेपाल पदक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रशिक्षक सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। इन्टरनेशनल सोतोकान कराते युनाइटेड (आईएसकेयू) र इन्स्टिच्युट अफ सोतोकान कराते युनाईटेड (आईएसकेयु)को संयुक्त...
फर्ममा रहेको भिल्लेरियालमाथि ४&ndash;१ को जीत निकाल्दै बार्सिलोनाले ला लिगाको उपाधि जित्ने सम्भावनालाई कायम राखेको छ । जीतसँगै बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा रहेको रियल म्याड्रिडसँगको दुरी ४ अंकमा झार्न सफल भएको हो । खेलमा बार्सिलोनाले पाउ टोरेसको आत्मघाती गोलको मद्दतले अग्रता लिएको थियो । तर, लगत्तै जेरार्ड मोरेनोले भिल्लेरियालका लागि बराबरी गोल...
एस्टन भिल्लालाई हराउँदै लिभरपुलले घरेलु मैदानमा लगातार १७ औँ जीत हासिल गर्न सफल भएको छ । आइतबार भएको खेलमा लिभरपुल २&ndash;० गोलअन्तरले विजयी भएको हो । दोस्रो हाफमा साडियो माने र कर्टिस जोन्सले गोल गर्दै लिभरपुललाई जीत दिलाए । जीतपछि लिभरपुलको ८९ अंक पुगेछ । म्यान्चेस्टर सिटीको एक सिजनमा १ सय...
स्वारेज र ग्रिजम्यानको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बार्सिलोनाको शानदार जीत
काठमाडौं&ndash; स्टार फरवार्ड लुइस स्वारेज र एन्टोनी ग्रिजम्यानको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा भिल्लारियलमाथि शानदार जीत हात पारेको छ । बार्सिलोनाले घरेलु टोलीमाथि ४&ndash;१ को जीत निकाल्दा स्वारेज, ग्रिजम्यान र अन्सु फातीले एक(एक गोल गरे । बार्सिलोनाले एक गोल भने आत्मघाती उपहार पाएको थियो । भिल्लारियलमा आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले...
संघर्षपूर्ण जीतसँगै ला लिगामा रियल मड्रिडलाई ४ अंकको अग्रता
काठमाडौं&ndash; स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा शीर्षस्थानको रियल मड्रिडले संघर्षपूर्ण जीत हासिल गरेको छ । आइतबार भएको खेलमा रियलले एथ्लेटिक बिल्वाओलाई १&ndash;० ले पराजित गरेको छ । घरेलु टोली एथ्लेटिकोलाई हराउन रियललाई मुस्किल परेको थियो । ७३औं मिनेटमा रामोसले पेनाल्टीमा गरेको गोल नै रियलका लागि निर्णायक सावित भयो । ड्यानी गार्सियाले मार्सेलोलाई पेनाल्टी...
बाटफोर्डविरूद्ध चेल्सीको शानदार जीत
काठमाडौं &ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले वाटफोर्डबिरुद्ध शानदार जीत निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा चेल्सीले वाटफोर्डलाई ३&ndash;० ले हराएको छ। चेल्सीको जीतमा ओलिभर जिराउड, विलियन र रोस बार्कलीले गोल गरे । बार्कलीको पासमा जिराउडले २८ औं मिनेटमा चेल्सीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए । पहिलो हाफको अन्तिम समयमा क्रिस्टियन पुलिसिकलाई डिबक्स...
काठमाडौं&ndash; स्पेनिस ला लिगामा शीर्ष स्थानको रियल मड्रिडले गेटाफेविरूद्ध संघर्षपूर्ण जीत निकालेको छ । कप्तान सर्जियो रामोसले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि गएरातिको खेलमा रियलले गेटाफेलाई १&ndash;० ले पराजित गरेको छ । घरेलु मैदान अल्फ्रेडो डी स्टेफानो रंगशालामा भएको खेलमा गेटाफेले दोस्रो हाफमा गरेको भूल नै हारको कारण बन्यो । ७८ औं मिनेटमा म्याथिअस ओलिभिएराले...
वेष्ट इन्डिजका लिजेन्ड क्रिकेटर विक्सको निधन
एजेन्सी &ndash; क्यारेबियन टोली वेष्ट इन्डिज क्रिकेटका लिजेन्ड सर एभरटन विक्सको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । विक्सको बिहीबार बिहान निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । विक्सले ४८ टेस्टमा ५८.६१ को औसतमा ४ हजार ४ सय ५५रन बनााएका थिए । उनी ५ टेस्टमा लगातार शतक बनाउने ब्याट्सम्यान समेत...
इंग्लिस प्रिमियर लिगः वेस्ट ह्यामसंग चेल्सी पराजित
एजेन्सी&ndash; प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्यामसँग चेल्सीले हार ब्यहोरेको छ । चेल्सीले वेस्ट ह्यामसंग ३&ndash;२ को हार ब्यहोेरेको हो । ब्राजिली स्टार विलियनमले दुई गोल गरे पनि चेल्सीले हार जोगान सकेन । उनले खेलको ४२ औं मिनेटमा पेनाल्टीमा चेल्सीलाई अग्रता दिलाएका थिए । हिलो हाफको ईन्जुरी समयमा टोमस सौसेकले घरेलु टोलीका...
मेस्सीका ७०० गोल
एजेन्सी - लियोनल मेस्सीले खेल जीवनको ऐतिहासिक आँकडा पूरा गरेका छन् । उनले खेल जीवनको ७०० औँ गोल गरेर नयाँ खुड्किला पार गरेका हुन् । स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा मेस्सीले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल उनको व्यवसायिक खेल जीवनको ७०० औँ गोल बन्यो । उनले अर्जेन्टिना र...
बार्सिलोना र युभेन्टसले खेलाडी खेलाडी साटफेर गर्ने
काठमाडौं &ndash; स्पेनिस महारथी बार्सिलोना र इटालीयन जायन्ट युभेन्टसले खेलाडी साटफेर गर्ने भएका छन् । बार्सिलोनाले आफ्ना मिडफिल्डर आर्थरलाई युभेन्टस पठाएर उनको स्थानमा युभेन्ट्सका मिडफिल्डर मिरालेम प्जानिकलाई क्लब भित्र्याउने तयारी गरेको छ । ६० मिलियन युरो र ५ मिलियन पछि थप्ने क्लबको प्रस्तावमा बोसनियाका प्जानिकले सहमती भएका छन् । सन् २०१६ मा...
साफ च्याम्पियनसिप फुटबल एक वर्षपछि धकेलियो
काठमाडौं &ndash; बंगलादेशमा तय भएको १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल एक वर्षपछि मात्रै हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले सृजित विषम परिस्थितिले प्रतियोगिता एक वर्ष सारिएको हो । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को सोमबार बसेको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप एक वर्ष सार्ने निर्णय गरेको हो । अब प्रतियोगिता सन् २०२१ मा...
क्रिस्टलमाथि बर्नलीको १–० को जीत
काठमाडौं &ndash; इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा बर्नलीले क्रिस्टल प्यालेसमाथि कठिन जीत हात पारेको छ । सोमबार राति क्रिस्टलको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बर्नलीले १&ndash;० को जीत निकालेको हो ।बर्नलीको जितमा बेन मिले ६२ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । जीतसंगै ४५ अंकसहित आठौं स्थानमा छ भने युरोपा लिग छनोटको...
शीर्ष स्थानमा उक्लदै रियल म्याड्रिडले लियो बार्सिलोनासँग दुई अंकको अग्रता
स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको रियल म्याड्रिडले दोस्रो स्थानको बार्सिलोनासँग दुई अंकको अग्रता लिएको छ। रियलले आइतबार राति भएको खेलमा अंक तालिकाको पुछारमा रहेको इस्प्यान्योललाई १&ndash;० गोलले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाएको हो। रियलको जितमा कासेमिरोले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको ४५ मिनेटमा करिम बेन्जिमाले उपलब्ध गराएको पासमा गोल...
एफए कपः सेमिफाइनलमा पुग्ने टिमको टुंगो, कुन–कुन टिमबीच हुँदैछ भिडन्त ?
एफए कपको सेमिफाइनलमा पुग्ने चार वटै टिमको टुंगो लागेको छ। म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड, चेल्सी र आर्सनलले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरे। आइतबार अबेर राति म्यानचेस्टर सिटीले न्युकासललाई २&ndash;० ले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्&zwj;यो। उसका लागि डे ब्रुनाले ३७ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत पहिलो गोल गर्दा रहिम स्टर्लिङले ६८ मिनेटमा अग्रता...
काठमाडौं &ndash; म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार भएको क्वाटरफाइनलमा नर्विच सिटीलाई अतिरिक्त समयमा २&ndash;१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै युनाइटेड अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो । नर्विचको मैदानमा निर्धारित समय १&ndash;१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो । अतिरिक्त समयमा कप्तान ह्यारी मगायरले गोल गर्दै युनाइटेडलाई...
लगातार आठौं पटक बार्यनले उचाल्यो बुन्डेसलिगाको ट्रफी, डर्टमण्डको नमिठो हार
काठमाडौं&ndash; बुण्डेसलिगा च्याम्पियन बनिसकेको बायर्न म्युनिखले सिजनको अन्तिम खेलमा वल्फसवर्गलाई ४&ndash;० ले पराजित गर्दै सुखद अन्त्य गरेको छ । दुई खेलअघि नै उपाधि पक्का गरिसकेको बायर्नले शनिवार फराकिलो जितपछि च्याम्पियन ट्रफी समेत उचालेको छ । बायर्नको यो लगातार आठौं बुण्डेसलिगा उपाधि हो । बायर्नका लागि खेलको चौथो मिनेटमै किंग्सले कोमनले गोल...
काठमाडौं&ndash; बायर्न म्युनिखका पोलिस फरवार्ड रोबर्ट लेवान्डोस्की जर्मन बुन्डेसलिगाको &lsquo;प्लेयर अफ दी सिजन&rsquo; घोषित भएका छन् । बायर्नलाई लगातार आठौं पटक उपाधि दिलाउन यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका लेवान्डोस्की सिजनको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका हुन् । उनले जाडोन सान्चो, काई हाभार्ट लगायत खेलाडीलाई पछि पारे । बोरुसिया डर्टमण्डका सान्चो दोस्रो र बाय...
पाकिस्तानका ६ क्रिकेटर कोरोना संक्रमणमुक्त
पाकिस्तान&ndash; कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको पाकिस्तान क्रिकेट टिमका १० खेलाडीमध्ये ६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । गत साता कोरोना संक्रमण देखिएका १० खेलाडीमा पुनः परीक्षण गर्दा ६ जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । कोरोना नेगेटिभ देखिनेमा मोहमद हसनैन, सादव खान, फकर जमान, मोहमद रिजवान, मोहमद हाफिज र वाहब रियाज रहेका...
लिक्सीविरुद्ध युभेन्टसको ४–० को फराकिलो जित
काठमाडौं &ndash; क्रिष्टियानो रोनाल्डोले गोल गरेको खेलमा युभेन्टसले लिक्सीविरुद्ध फराकिलो जित हात पारेको छ । शुक्रबार राति भएको खेलमा युभेन्टसले लिक्सीलाई ४&ndash;० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । जीतसँगै सिरी ए मा युभेन्ट्सले दोस्रो स्थानको लाजियो भन्दा ७ अंकको अग्रता बनाएको छ । खेलको ३१ औं मिनेटमा लिक्सीका फावियो लुसिवनीले युभेन्टसका खेलाडीमाथि...
३० बर्षपछि लिभरपुलले जित्यो प्रिमियर लिगको उपाधि
एजेन्सी&ndash; इङ्ग्लीस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले म्यान्चेस्टर सिटीलाई पराजित गर्दा लिभरपुलले उपाधि उचालेको छ । बिहीबार राति भएको खेलमा चेल्सीले सिटीलाई २&ndash;१ गोल अन्तरले पराजित गर्दा लिभरपुल च्याम्पियन बनेको हो । लिगमा ७ खेल बाँकी हुँदा २३ अंकको स्पष्ट अग्रताले लिभरपुललाई उपाधि दिलाएको हो । योसँगै लिभरपुलले पछिल्लो ३० वर्षपछि उपाधि उचाल्दै...
ला लिगामा कीतिमान बनाएपछि रोमेरोले पाए 'मेक्सिकन मेस्सी'को उपनाम
एजेन्सी &ndash; मालोर्काका लुका रोमेरोले स्पेनिस ला लिगामा कम उमेर डेब्यु गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन् । बुधबार राति रियल मड्रिडविरुद्ध पहिलो पटक क्लबको सिनियर टिमबाट खेल्दै डेब्यु गरेका हुन् । मेक्सीकोमा जन्मिएका रोमेरोले अर्जेन्टिनाको युवा टोलीबाट खेलिसकेका छन् । रोमेरो १५ वर्ष २१९ दिनमा ला लिगामा डेब्यु गर्दै कीर्तिमानी बनाएका हुन्...
मालोर्कालाई हराउँदै रियल शीर्ष स्थानमा उक्लियो
एजेन्सी&ndash; स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । सोमवार राति भएको खेलमा म्याड्रिडले मालोर्कालाई २&ndash;० ले हराएको थियो । रियललाई जिताउन भिनिसियस जुनियर र सर्जियो रामोसले एक&ndash;एक गोल गरेका थिए । यो जीतसँगै रियल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । रियलले ६८ अंक जोडेको छ ।...
पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका थप ७ क्रिकेटरमा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं &ndash; पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका थप सात जना खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । जुन २८ मा इङ्ग्ल्यान्ड टुरका लागि जाने तयारीमा रहेको पाकिस्तानका थप सात जना खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले जनाएको छ । यसअघि तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो सँगै पाकिस्तान...
एथलेटिको बिल्बावलाई हराउँदै बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा उक्लियो
काठमाडौँ&ndash; साबिक विजेता बार्सिलोनाले कठिन प्रतिस्पर्धी एथलेटिको बिल्बावविरुद्व १&ndash;० गोलको झिनो अन्तरको जित निकाल्दै ला लिगाको अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। बार्सिलोनाको लागि एक मात्र गोल खेलको ७१ औं मिनेटमा इभान राकिटीजले गरे। &ldquo;म्यान अफ द म्याच&rdquo;...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th April 2020
New Delhi, April 15: This year&rsquo;s Indian Premier League (IPL) has been postponed indefinitely following the COVID-19 pandemic, key franchise officials told Reuters on Wednesday. Originally scheduled to begin on March 29, the eight-team league was initially suspended until Wednesday even as India enteredathree-week lockdown last month. After the lockdown...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 31st March 2020
UK MARCH 27:&nbsp;Manchester United will refund supporters if they have to play their remaining home games of the season behind closed doors or if they are scrapped due to the coronavirus pandemic. The deadline for season ticket renewals for next season has also been suspended, with no indication as to when...
मेष राशिफल (Saturday, January 16,..
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हेतुले नागरिक एप सार्वजनीक गरेको छ । सञ्चार..
हेटौंडा । मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर -०२ को कांग्रेस चोक र नयाँ..
काठमाडौँ । जुवा खेलिरहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पूर्वका प्रमुखसहित पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ..
काठमाडौँ ।आज अर्थात&nbsp; शुक्रबारदेखि सुरु भएको चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीले विजयी..
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा दुई सय ७० जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको..